Dr. Tint Swe's Writings: October 2018
ရွှေရောင် မှည့်ဝင်း စပါးခင်း၏
အို့့ ဘဝတခို
အလယ်တန်း ကဗျာလက်ရွေးစင်စာအုပ်ပါ သင်းအောင်ရဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံကဝါးနေလို့ အားနာတယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တင်ထားသူတွေက တတွေကို တစ်လုပ်ထားကြတယ်။ မလုပ်ကောင်းပါ။
မျက်စောင်းထိုးသူ နေပူကလူမကြောက်။ လေးအားပြိုင်သူ မထိုင်အားသူမကြောက်။
ရွှေရည်မှည့်ဝင်း မြန်မာစာစပါးခင်းမှ တေးချင်းဟစ်အော်သံ ကြားရပါစေသတည်း။
Unknown woman # 1
ဆရာ ကျွန်မဆေးစားတာ တစ်နှစ်ကျော်စားပါတယ် အိမ်ထောင်သက်တမ်းက သုံးနစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ ကလေးရနိုင်အောင်ဘာဆေးစားရမှာလည်းလမ်းညွန်ပြပါအုံး
မေးနည်း ပို့ပြီး။ အသက် ရာသီ မပြောလိုသူအတွက် ဘလော့လင့် ပေးထား။
Unknown man and woman # 1
အသက် မသိ ရာသီ မသိ
ဆရာရေ ကလေးအကြီး ၁ နှစ်နဲ့ ၃လ နောက်ကလေးယူချင်တယ် ရပါသလား
အသက် မသိ ရာသီ မသိ။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။
Unknown woman # 2
Diarrhea မေးနည်း ပို့ပြီး
ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင့် သမီးမေးစရာရှိလို့ပါ
အသက်က ၁၉နှစ်ပါ မ ပါ ဝမ်းသွားတာ ကြာပြီရှင့် ထမင်းလဲမစားနိုင်ဘူးသိပ်ပြီး လူလဲအရမ်းပိန်သွားတယ် လမ်းနည်းနည်းလျှောက်တာနဲ့မောတယ် အဲ့တာဘာဖြစ်တာလဲရှင့်
Diarrhea ဝမ်းပျက်ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/03/diarrhea.html
Unknown man # 1
အသက် မသိ ဒါပေမဲ့ အဖြေလင့် ပို့ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ ဆရာခင်ဗျ မေးစရာလေး ရှိလို့ပါဆရာ ကျွန်တော် တကိုယ်လုံး ဘာကြောင့်မှန်းမသိ ယားနေလို့ပါဆရာ ကုပ်ရင်လည်း အပိန့်တွေ ဖြစ်လာတယ်ဆရာ ပြီးတော့ အသားရောင်က အနီပြင်တွေ ဖြစ်တယ်ဆရာ တကိုယ်လုံး မနေနိုင်အောင်ယားပါတယ် ဆရာ ကျွန်တော်ထင်တာ allergic ဖြစ်တာများလားဆရာ မနေနိုင်အောက်ကို ယားတာပါဆရာ။ ဘာဆေးများ သောက်ရမလဲ လမ်းညွှန်ပေးပါဦး ဆရာခင်ဗျာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အသက် မသိ။ ဒါပေမဲ့ အဖြေလင့် ပို့ပါတယ်။ တစ် ၂ လုံးကို ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
Hives အင်ပျဉ် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/09/hives.html
Unknown man and woman # 2
ကျား မ အသက်တွေ မသိ
ဆရာ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ ကျနော် အိမ်ထောင်ကျတာ ၂နှစ် ကျော်ပါပီ ခင်ဗျ အိမ်ထောင်သက် ၂နှစ်ကျော်အတွင်း ကလေး မရသေးလို့ အကြံဥာဏ်လေး ပေး ပေးပါ ဆရာ ခင်ဗျ
ကျား-မ အသက်တွေ မသိ။ အမျိုးသမီး ရာသီ မသိ။ မေးနည်းပို့လိုက်တယ်။ အသက် အချက်အလက်တွေ မပြောလိုလည်း ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။
Unknown man # 2
အသဲရောင် ဘီ နဲ့ စီ စာတွေ ခဏခဏ (ခဏခဏ) တင်ထားတယ်။ မေးနည်းပါ ဘလော့မှာလည်း ဖတ်နိုင်တယ်။
Unknown man # 3
တစ် ၃ လုံး ပြင်လိုက်တယ်
ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့ ညာဘက် လက်သန်းကြွယ် အဖျားစွန်းဘက် လက်ဆစ်လေးက သွေးအလျှောက်သလို ထုံနေတာ တရက်ကျော်လောက်ကြာနေပါတယ် ခင်ဗျာ့ တချို့က လေဖြတ်တတ်တယ် လို့ပြောနေကြလို့ အန္တရာယ် ရှိနိုင်လား သိချင်လို့ပါ ဆရာခင်ဗျာ ကျွန်တော့အဖေ ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လို သွေးမလျှောက်တာကနေ ခြေမလေးတဆစ်က ပုပ်သလိုဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ရလို့ပါ ဆရာကြီးခင်ဗျာ့
အသက် မသိ။ မပြောလည်းရ။ မေးနည်းပါ ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ တစ် ၃ လုံး ပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
Unknown man # 4
Hepatitis B ထက်ဆိုတာ ချွန်ထက်တာ
ဆရာရှင့် မေးချင်လို့ပါ အသက်က ၂၈နှစ်ပါ ယောက်ကျားလေးပါ သွေးစစ်တာ ဘီပိုးရှိတယ်လို့ သိရလို့ပါ အဲ့ဒါ ဘာဆေးတွေ ထက်သောက်သင့်လည်းရှင့်
Hepatitis B treatment (ဘီ) ပိုးကုသနည်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/hepatitis-b-treatment.html
ဆေးတွေထက်သောက် မဟုတ်။ ထပ်သောက်လို့ ရေးရတယ်။ ထက်ဆိုတာ ချွန်ထက်တာ။ ထပ်က ထပ်လkပ်တာ။
Unknown man and woman # 3
ကလေးလိုချင်လို့ပါဆရာ အိမ်ထောင်သက်၃နှစ်ကျော်ပါပြီ။ အကြံပေးပါဦးဆရာ။
ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ သေချာရေးပြီး gmail ကနေမေးလိုက်ပါမယ်ဆရာ
Og ပြခဲ့တာဆရာ Result နဲ့ ပေးတဲ့ဆေးတွေအရ ကလေးရနိုင်လားဆရာ မိန်းမဘက်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ချွတ်ယွင်းချက်မရှိဘူးတဲ့ခဗျ ဆေးသုံးလစာပေးခဲ့ပါတယ် နှစ်ယောက်လုံးကို
အသက်မပြောလိုသူတွေအတွက် ဘလော့လင့် ပေးထားတယ်။
Unknown man # 5
ဆရာ ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါအုံးဆရာရယ် ဆိုင်ကယ်အက်စီးဒန့်ဖြစ်တုံးက အမာရွတ်ကို ဘယ်လိုဆေးနည်းနဲ့ ပြောက်အောင်လုပ်ရမလဲဆရာ မျက်နာမှာဖြစ်နေတော့ လူကြားထဲဆိုအရမ်းအားငယ်မိတယ် ကျွန်တော့်ကို ကူညီပါအုံးဆရာ
အသက် မသိ။ မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်တယ်။ ပျောက်လို့ ရေးရတယ်။
Unknown man # 6
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ကျနော့့့် ထိပ်မှာ အနီရောင်အဖု အရည်ကြည်ဖုလေးတွေ ထွက်နေပြီး အရေပြားပေါ်မှာလဲ အရည်ကြည်ဖုထွက်နေပါတယ် တခါတလေဆို အရမ်းယားပါတယ် မနေနိုင်အောင်ပါပဲဆရာ ဆေးသောက်လို့ ပျောက်ပါ့မလား ဘယ်လိုရောဂါမျိုးဖြစ်နေလဲ ပြောပြပေးပါလား ဆရာ (လေးစားစွာဖြင့်)
လာပြန်ပြီ နောက်တယောက် နောက်တခု နောက်ထပ် လိမ်ချင်သူ နောက်ထပ် အလိမ်ခံချင်သူ
ဇွဲထက်မင်း ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ လာအပ်ရင် လက်မခံမိစေနဲ့။ အဲ့ဒီအကောင့်က မောင်တော ဘက်ကဘင်္ဂ်ါလီhacker!့့
လာပြန်ပြီ နောက်တယောက်။ နောက်တခု။ နောက်ထပ် လိမ်ချင်သူ။ နောက်ထပ် အလိမ်ခံချင်သူ။
မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးအသက် 25 ရှိပါပြီ သားဦးကလေးလေးမွေးထားတာဒီနေ့ နဲ့ဆို 11 ရက်ရပါပြီ ကော်ဖီမစ် သောက်လို့ရပါသလားရှင့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရှင် အစားအသောက် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေလဲ ပြောပြပေးပါရှင်
Myths of Pregnancy and Postpartum မီးတွင်းကျန်းမာရေး အယူအဆအမှားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-of-pregnancy-and-postpartum.html
Coffee mix ကော်ဖီမစ် နဲ့ ကျန်းမာရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/coffee-mix.html
သတ်ပုံပြင်စရာမလိုတဲ့မေးခွန်း။ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း။ အတော်များများက သားဦးကို သက်ဦး၊ တချို့က သဦး၊ တချို့က တစ်ဦးလို့ရေးကြတယ်။ အတော်ကြီးများများက ပါပြီကိုပါပီလို့မှားရေးနေကြတယ်။ မြန်မာစာမှာ မစ် လုပ်တာတွေက များလှတယ်။
Common Cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင်
ဆရာရှင့် ကျွန်မရဲ့ကလေးတွေက အသက် ၂လခွဲသာရှိပါတယ် ညညဆိုနှာစေးတာနဲ့ နို့မစို့နိုင်အိပ်မပျော်ကြပါဘူး ရေငွေ့ထုတ်စက်လေးသုံးသင့်ပါသလားဆရာ ရေငွေ့ထုတ်စက်က အပူအအေးရှိတော့ ဘယ်စက်က ပိုကောင်းပါသလဲဆရာ
Common Cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
ဆရာရှင့် ကျမသားလေး ၁၃ ရက်သားလေး ဒီနေ့နို့သီးခေါင်းတဝိုက် မာနေတယ် နှစ်ဖက်လုံး ဘာဖြစ်တာလဲ စိုးရိမ်ရလား
ဆရာရှင့် ကျွန်မသားလေး ခုနှစ်လနှာစေးချောင်းဆိုးပြီးအန်နေတယ် ဆေးခန်းပြတာသုံးရက်ပြည့်ပြီဆေးသောက်ရတာ ကျန်တာသက်သာပြီးအန်တာကမပျောက်ဘူး တရက်ကို တခါနှစ်ခါအန်တယ် ဒီတိုင်းနေလဲအော့ အော့နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Vomiting in babies ကလေးတွေအန်ရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/vomiting-in-babies.html
Unknown woman # 3
ဆရာရှင့် Allergic ချောင်းဆိုးနေတာကြာပါပြီ ဘယ်လိုသက်သာအောင်လုပ်ရမလည်း နည်းလမ်းတွေပြောပြပေးပါရှင့်
အသက် မသိ။ အမျိုးသမီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ မသိ။ မပြောလည်းရ။ မေးနည်းစည်းကမ်းပါ ဘလော့မှာဖတ်နိုင်။
ဆရာရေ သုံးလခံဆေးထိုးပြီး အတူတူနေဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်စောင့်သလဲ ဗိုက်ခွဲမွေးပြီး နှစ်လဘဲရှိတော့ နောက်ကိုယ်ဝန်ရမှာ စိုးရိမ်းလို့ပါ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပေးပါဆရာ
ဆရာ ခင်ဗျာ ကျွန်တော့်အသက် က၂၃နှစ်ပါ ယောကျာ်းလေး လူပျိုပါခင်ဗျာ လွန်ခဲ့တဲ့၅ လခန့်က ကျွန်တော့့် နဲ့ ပျော်ပါးခဲ့ပါတယ်ဆရာ ကျွန်တော် စိုးရိမ်လို့ဆေးစစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ နောက်ထပ်တခါ ထပ်စစ်ဖို့လိုသေးလားခင်ဗျာ
HIV ကိုတော့ ၃ လနေမှသာ စစ်နိုင်။
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအသက်က ၃၂ နှစ်ပါ ၂ နှစ်အရွယ်သမီးလေးတဦးရှိပါတယ် ဒုတိယကလေးယူဖို့ သားဥကြွေတဲ့ရက် အောက်တိုဘာ ၂၃ ၂၄ ၂၅ မှာအမျိုးသားနဲ့့ ပါတယ်ရှင် အခုဆိုတပါတ်ရှိပါပြီ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစစ်လိုရပါသလားရှင် ဒီနေ့ စစ်တာ မျဉ်း၂ ကြောင်းမပေါ်လို့ပါ ဒါမှမဟုတ် နောက်လ ၁၂ ရက်သွေးမပေါ်မှစစ်ရမှာပါလားရှင် ဒီကြားထဲစစ်ရင် တလမပြည့်လို့ ရမရ သိချင်လို့ပါဆရာ
ခဏခဏ နေ့တိုင်းလိုလို ဖြေနေတယ်။ ရာသီ တပတ်နောက်ကျချိန်ကစပြီး ဆီးစစ်နိုင်။ တစ် ၃ လုံးပြင်လိုက်တယ်။ ဆောရီး။
Breast Pain အသက်ကို အရင်မရေးတာတိုင်းကို ၂ ခါဖတ်ရတယ်
ကျမကိုလဲ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါဆရာ ရင်သားနှစ်ဖက်လုံး ကြွက်သားတွေနာနေတာ တပတ်လောက်ရှိပြီ မယ်မိုဂရမ်ရိုက်ဖို့လဲ မိုးကုတ်မှာမရှိဘူး အကျိတ်တော့မစမ်းမိဘူး ရင်သားတခုလုံးတော့ ပူစပ်နာကျင်ပြီး နေရခက်နေပါတယ် ဘာဖြစ်လို့များလဲ အရမ်းသိချင်ပါတယ်ရှင့် ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပါ အသက်ကသုံးဆယ့်ခုနှစ်ထဲမှာပါ ဖြေပေးပါနော် ဒေါက်တာအားကိုးပါတယ်
Breast Pain ရင်သားနာတာ ဘာလို့ပါလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/04/breast-pain.html
အသက်ကို အရင်မရေးတာတိုင်းကို ၂ ခါဖတ်ရတယ်။ အဲလိုမရေးဘို့ နေ့တိုင်း ရေးပါတယ်။
Respiratory tract infections အသက်ရှူလမ်း ပိုးဝင်ခြင်း
မင်္ဂလာပါ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် (၂၃)နှစ်ပါ။ (၉၃)ပေါင်ပါရှင့်။ အသက် (၁၀)နှစ်ဝန်းကျင်မှာ တီဘီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ တီဘီဆေး (၆)လသောက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ မေးစေ့အောက်မှာ အကြိတ်တစ်လုံးရှိပြီး လည်ပင်းဘေးနှစ်ဖက်မှာ အကြိတ်အသေး (၂)လုံးစီ ရှိပါတယ်ဆရာ။ စာကိုအသံထွက်ပြီး ကြာကြာဖတ်ကျက်မိသည့်အခါနှင့် ခရီးထွက်သည့်အခါတိုင်း မကြာခန အာသီးရောင်တတ်ပြီး ရာသီဥတုအကူးအပြောင်းတိုင်း ချောင်းရက်ရှည် ဆိုးပါတယ်ဆရာ။ ဆောင်းတွင်းရောက်လျှင် တစ်ရာသီလုံးနီးပါး ချောင်းဆိုးတတ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းပြသော်လည်း မကြာခန ချောင်းဆိုးပြီး အာသီးရောင်နေဆဲပါဆရာ။ယခု ကျွန်မချောင်းဆိုးတာ ၃ပတ်ကျော်နေပါပြီဆရာ။ ရောဂါအမျိုးအစားနှင့် ချောင်းဆိုးပျောက်ရန် ဘယ်လိုဆေးမျိုးသောက်ရမည်ကို သိလိုပါသည်ရှင့်။
မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအမျိုးသားအသက်၂၆ပါဆရာ ဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးမျက်နှာပေါ်အမာရွတ်ကြီးပါတယ်ဆရာ ပျောက်စေချင်လို့ဘာဆေးလိမ်းပေးရမလဲဆရာ
Scar (1) အမာရွတ် (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-1.html
Scar (2) အမာရွတ် (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/scar-2_21.html
Scar (3) အမာရွတ် (၃) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/scar-2.html
Mammogram မင်မိုဂရမ် အဖြေ
ကျွန်မ မျက်နှာအပါအဝင် ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားမှာ အရည်ကြည်ဖုလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ ပထမဦးဆုံး အရေပြား နီရဲလာပြီး မှ အလယ်မှာ အရေကြည်ဖုတွေပေါက်လာတာမျိုးပါ။ တစ်ချက်တစ်ချက် စူးကနဲယားတတ်ပါတယ်။ တစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ စပေါက်တဲ့နေ့မှ ယနေ့အထိဆို ၃ ရက်ရှိပါပြီ။(ပုံများလည်း အောက်မှာကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။) ကျွန်မက အသက် (၃၂) နှစ်၊ အပျိုပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ၁၂ ရက်လောက် သွားနေခဲ့ရပြီး ပြန်ခါနီး နောက်ဆုံးရက်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ကျွန်မ ဘယ်ဘက်ရင်သားမှာ အကျိတ်တွေ့လို့ Mammogram (အသက်ငယ်သေးသော်လည်း) ရိုက်ထားဖူးသူပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၅ ရက်ခန့်က အကျိတ်စတွေ့ပြီး Mammogram ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဖြေအရ အကျိတ်မဟုတ်ဘဲ ရေအိတ်သာဖြစ်လို့ Fine Needle Aspiration (အပ်နဲ့စုပ်ထုတ်ခြင်း) ပြုလုပ်ပြီးစီးသွားပါပြီ။ BIRADS level II ရှိပါတယ်။ ဒီကုသမှုတွေကို ဘန်ကောက်ဆေးရုံသို့ သွားရောက် ကုသခဲ့တာဖြစ်ပြီး တနှစ်တကြိမ် ပြန်လာပြဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်ရှင့်။ ယခုလို အဖုတွေပေါက်တာဟာ Mammogram ရိုက်ခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်နေမလားလို့ ပြေါပြတဲ့သဘောပါရှင့်။ ဒီနေ့တော့ CALAMINE Lotion ကိုပါးပါးလေးလိမ်းထားပါတယ်။ အရက်ပြန်လည်း တို့တို့ပေးပါတယ်။ အဖုတွေပျောက်ဖို့နဲ့ ပေါက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုသိလိုပါသဖြင့် ဆရာရဲ့ အကြံပြုချက် ညွှန်ကြားချက်လေးများ ကျေးဇူးပြု၍ တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး သိပါရ ကြားပါရစေရှင့်။
အသက်ကို အရင်မရေးလို့ ၂ ခါထပ်ဖတ်ရ။
မင်မိုဂရမ်ကြောင့် မဟုတ်လောက်။ အလာဂျီ သို့ အင်းဆက်တမျိုးမျိုးကိုက်သလား စဉ်းစားရ။ ပုံပါလိမ်းဆေးသင့်။ တချို့နေရာတွေမှာ ပြည်တွေ့။ အလိုလိုမပျောက်ရင် ပိုးသေဆေးလိုနိုင်။ Cipladine cream လိမ်းနိုင်။ စားဆေး မလိုလောက်လို့ထင်ရ။
BI-RADS ရင်သား မင်မိုဂရမ်အဖြေ
Category0= စစ်ဆေးခြင်းမပြည့်စုံ
Category 1 = ကင်ဆာမရှိ၊ သိပ်သည်းမှု ပုံမှန်။
Category2= ပုံမှန်။ ကင်ဆာမရတွေ့။ တချို့ကို ပုံမှန်ပြန်စစ်ဘို့ အကြံပြုမယ်။ မေးခွန်းပါလူနာအဖြေ။
Category3= ပုံမှန်ဖြစ်နိုင်။ ၂% တော့ ကင်ဆာအလားအလာရှိ။ ၆ လတကြိမ် ထပ်စစ်ပါ။
Category4= ပုံမှန်မဟုတ်တာတွေ့ရှိ။ ၂၀% ကနေ ၃၄% ကင်ဆာဖြစ်လမ်းရှိ။ ဘိုအော့ပစီလုပ်မယ်။ 4A အေ၊ 4B ဘီနဲ့ 4C စီလို့ထပ်ခွဲသေးတယ်။
Category5= ကင်ဆာသံသယရှိ။ ၉၅% ကင်ဆာဖြစ်နိုင်။ ဘိုအော့ပစီ သေချာပေါက်လုပ်ရမယ်။
Category6= ဘိုင်အော့်ပစီလည်းစစ်ပြီး၊ ရင်သားကင်ဆာ
ကျွန်မရဲ့အသက်ကတော့ ၂၅ ပြည့်မှာပါ နယ်ကပါ ရန်ကုန်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ရောက်နေတာပါ ညတည အိပ်နေရင်း တကိုယ်လုံးတုန်ပြီးတက်တယ်လို့ အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေကပြောပါတယ် သတိရလာတော့ အဲ့လိုဖြစ်တာကို ကျွန်မလုံးဝမသိပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျွန်မကသရဲဝင်ပူးတယ်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြတယ် မနက်မှ တကိုယ်လုံးနာနေမှန်း သိတယ် ပါးကြောတွေရောနာတယ် အဲ့ဒါကိုလည်းဂရုမစိုက်ခဲ့မိဘူး အလုပ်သွားမြဲသွားခဲ့ပါတယ် နောက်ဆယ်ရက်လောက်ကြာတော့ အလုပ်ထဲမှာလုပ်နေရင်းသတိလစ်ပြီး တက်သွားလို့ ဆေးရုံပို့လိုက်ကြတော့မှဆေးရုံရောက်မှ သတိရတယ် ECG ရိုက်ကြတယ် စမ်းသပ်ကြတယ် သွေးစစ်တာနဲ့ခေါင်းကို EEG ရိုက်ခိုင်းတယ် ဒါပေမယ့် မလုပ်ခဲ့ရဘူး အဲ့ဒါနဲ့လေ ညတက်တုန်းကတော့ နောက်ရက်တွေဆိုကိုယ်ခန္ဓာမှာပုရွက်ဆိတ်တွေတက်တယ် ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ ခုထိသိရသေးဘူး။
ဘာကြောင့်လဲ ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ သေချာ မသိသေး မေးချင်တာတွေတော့ မရှိတယ်။ မမေးတော့ပါ။ လင့်တွေပို့မယ်။ ဖတ်ပြီး ကိုယ့်မှာဘာဖြစ်သလဲ စဉ်းစားပါ။
1. Elastic epilepsy အတက်ရောဂါတမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/elastic-epilepsy.html
2. Epilepsy အတက်ရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/epilepsy-1.html
3. Epilepsy အတက်ရောဂါ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/epilepsy-1.html
4. Fainting မူးမေ့ခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2018/01/fainting.html
5. Night terrors အိပ်မက်ထဲ သူရဲစီးခံရခြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2018/07/night-terrors.html
6. Seizure First Aid တက်နေသူကို ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2017/03/seizure-first-aid_9.html
7. Sleep paralysis ဘီလူးစီးခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/sleep-paralysis.html
အီမိုကွန်အရုပ်တွေ စတစ်ကာတွေ အသံဖိုင်တွေ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ သတင်းတွေ သီချင်းတွေ တရားတွေ ဘုရားပုံတွေ ဆုတောင်းစာတွေ ခြိမ်းခြောက်စာတွေ ဟက်ကာဆိုတာတွေ ရွှေပေလွှာတွေ မပို့ပါရန် မကပ်ပါရန်လို့ အကြိမ်ပေါင်း တရာလောက်ရေးထားတယ်။
လက်နဲ့ ကြိုက် မကြိုက်သာ ရေးပါရန်။
Rash ယားနာပုံစံက ပွေးကွက်လိုပုံမျိုးဖြစ်ပြီး
သမီးအသက်က ၂၉ ပါ သမီးအရေပြားယားယံတဲ့ဝေဒနာခံစားနေရပါတယ် ပေါင်နှင့် အတွင်းခံဝတ်တဲ့နေရာအပါအ၀င် ခြေထောက်မှာလဲ အနည်းငယ်ရှိနေပါတယ် ယားနာပုံစံက ပွေးကွက်လိုပုံမျိုးဖြစ်ပြီး ဆေးလိမ်းပြီး၂ ရက်လောက်ကြလျှင် အရေခွံလေးတွေလန်သွားပြီးခဏ သက်သာသွားပါတယ် နောက်ရက်အနည်းငယ်ကျရင် ပြန်ယားလာပါတယ်ဆရာရှင့် နီးစပ်ရာဆရာဝန်နှင့် ဆေးပြတော့ သောက်ဆေးနှင့် zaricort လိမ်းဆေးပေးပါတယ် အရှင်း ပျောက်မသွားလို့ သမီးကို ဆေးလေးပြောပြပေးပါရှင် လိုအပ်လို့ ဆေးသောက်ရမယ်ဆိုလဲသောက်ပါမယ်ရှင့် ဖြစ်နေတာ ၁ နှစ်လောက်ရှိပါပြီဆရာ
ပွေး၊ ယားနာ၊ ဖန်းဂတ်၊ အလာဂျီ၊ နှင်းခူ မတူကြပါ။ ဆေးနည်းလည်း တခြားစီ။ မေးတဲံသူ ဘာဖြစ်နေ မသိသေးပါ။ ရောဂါစာအားလုံး ဘလော့မှာ ဖတ်နိုင်တယ်။
Fungus မိုးစိုစို မှိုသတိထား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/fungus.html
Scabies ယားနာ (ဝဲ) https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/scabies.ht
Dermatitis ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ အရေပြားအနာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/eczema.html
ဆောင်းအမီ ဟုတ်ကဲ့ ပြင်လိုက်ပါပြီ
ကျွန်တော်က မှားတာတွေ့ရင် အချိန်ရသလောက် ပို့စ်အဖြစ်တင်ပါတယ်။ မှားနေတဲ့ပို့စ်အောက်က ကွန်မင့်ကနေ ပြင်ပေးတာက နည်းတယ်။ အခြေအနေကြည့်ပြီးမှသာ ကွန်မင့်ရေးပါတယ်။ တချို့ကမကြိုက်ကြပါ။ ပြင်ပေးတာကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံသူတချို့လည်းရှိတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ပြင်လိုက်ပါပြီ။ ကျေးဇူးပါဆရာရှင့်။
ကျွန်တော် စာရိုက်ကျနေရစ်တာသာမက မှားရေးတာကို ထောက်ပြပြင်ပေးသူတွေရှိတယ်။ တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်း လိုက်ပြင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးလို့လည်းရေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြင်စရာနေရာက ၇ နေရာရှိတာ။ ဖေ့စ်ဘွတ်က ၂ ခု၊ ပေ့ခ်ျက ၃ ခု၊ ဘလော့တခုနဲ့ သိမ်းထားတဲ့ဖိုင်။
ဆုံးမရလွယ်ကူသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ ဘုရားလက်ထက်ကတည်းက စကားဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးက ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏဆိုတဲ့ ကာတွန်းပညာပေးဖတ်ရကတည်းက စွဲမှတ်နာယူပါတယ်။
ကျွန်တော်ရေးတာတွေက အတော်များတယ်။ အမှားတွေပါနေမယ်။ စာအဟောင်းတွေမှာ အမှားတွေပိုပါတယ်။ ဆောရီး။
ညနေ ၃ နာရီ ၃၃ မိနစ်
ဆောင်းအမီကို ဆောင်းအမှီလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့ ပြန်ဆိုသီချင်း တင်ထားတာတွေ့တယ်။ မီ နဲ့ မှီ အတော်မှားကြတယ်။
တေးရေး သောတမောင်၊ အဆို မေလှမြိုင်သီချင်းတင်ထားတာကတော့ ဆောင်းအမီ မှန်တယ်။
- အချိန်မတိုင်မှီ ကြွေလွင့်ခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ့အနုပညာကြယ်ပွင့်များ (မမှန်)
- ခေတ်မှီ နေဆဲ တကွက် ကာတွန်း (မမှန်)
- ကိုယ်ဉာဏ်မမှီ မသိတဲ့ အရာတွေကို စဉ်းစားပြီးမှ ပြောကြပါ။ (မမှန်)
၁။ ကျွန်တော် မြန်မာစာအသုံးမှာ မီနဲ့မှီ အသုံးကို သိချင်လို့ပါဆရာ ဖြေပေးနိုင်မလားဗျ
၂။ ဆရာခဗျား ခါတော်မှီ နှင့် ခါတော်မီ မှာဘယ်ဟာကစာလုံးပေါင်းအမှန်လဲခဗျား။ လေးစားစွာဖြင့်။
၃။ အပမီ၊ အပမှီ။ ဘယ်ဟာ အမှန်လဲဆရာ။
၄။ ဆရာရှင့် မီ/မှီ သုံးတာအရမ်းမှားနေလို့ ရှင်းပြပေးပါရှင့်။ မမီမကမ်း၊ လှတာလိုက်လို့မမီ၊ သူ့အလှမမီ၊ တိုင်မှီ။ မှီခိုဆိုတာ မှန်လားရှင့်။ ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ၊ မကြာမီတွေမှာ ဟထိုးလိုလားရှင့်။ လူတွေ အရမ်းရေးကြတာ လှတာလိုက်လို့မမှီဘူးလို့ ဒါလဲဟထိုးပါရင် မှန်လားရှင့်။
မီ ဆိုတာ မတိုင်ခင်ကသဘောမှာ သုံးတယ်။ မ နဲ့တွဲပြီးသုံးတယ်။
နိုင်သည်သဘောလည်းသုံးတယ်။ လှမ်းယူလို့ရနိုင်သည်၊ လိုက်လို့ရနိုင်သည်။
မှီ ကို အားကိုးအားထားပြုသည်မှာသုံးတယ်။
လှတာလိုက်လို့မမှီဘူးလို့ရေးတာ မမှန်ပါ။ လှတာလိုက်လို့မမီဘူးဆိုတာ သူတပါးလှတာကို လိုက်လို့မမီဘူးလို့ ရေးချင်တာ ထင်တယ်။ လှတာက နာမဝိသေသန (သို့) နာမ်။ မမီဘူးဆိုတာက ကြိယာဝိသေသန။ သဒ္ဒါအရ မှားတယ်။ လှတာကို မှီခိုတာဆိုရင် အဓိပ္ပါယ်တမျိုးဖြစ်တယ်။ သူ့အလှကို လိုက်မမီဆိုရင် မှန်တယ်။
အပမှီအသုံးက သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာမပါ။ အပ ပယောဂဝင်တာကိုဆိုချင်တာဆိုရင် အပမှီသာသုံးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ သတ်ပုံကိုသာပြောတာ၊ တကယ်တော့ အဲလိုဖြစ်တာ မရှိပါ။ စိတ်အခြေအနေတခုကိုပြောကြတာဖြစ်တယ်။
တုပ်ကွေးကာကွယ်ရေး ပညာပေးစာတခုမှာ သတ်ပုံတွေမှားနေလို့။ တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာပြပြီး ပုံမှန်ဆေးကုသကြည့်၍ ၂ ရက်အထက်နေလို့မှ မသက်သာလျှင် နီးစပ်ရာဆေးရုံများသို့ အချိန်မီ သွားရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရေးထားတာ တုတ်ကွေးဖြစ်နေတယ်။ တုပ်ကွေးဖြစ်တယ်။ လျင်ဖြစ်နေတယ်။ လျှင်ဖြစ်ရမယ်။ မလိုအပ်ပဲသွားလာခြင်းလို့ရေးထားတယ်။
မကြာမီလာမည် မျှော်။ ကြီးရင် ချီ ငယ်ရင်မှီ။
မောင်ပန်းမွှေး ယုန်လိုက်တယ်။ တောကျောင်းဘုန်းကြီး မြင်လိုက်တယ်။ လိုက်ကြပါလား တပည့်များ။ လိုက်လို့မမီ ပြေးပြန်ပြီ။ (အမည်မသိစာဆို)
ခေတ်မီမီ ကမ္ဘာကြီးရှုမြင့့် ခေတ်ရော ရှေးမီ သမားကျော်များပင့့်
ကိုအံ့ကြီး - လူချွှန်လူကောင်း https://www.youtube.com/watch?v=SSc8clgK3oE
ဘယ်ပန်းချီရေးလို့မမီ (ဇော်ဝမ်း) https://www.youtube.com/watch?v=SnbTOvfewq0
ဆောင်းအမီ - စောင်းလှိုင်ဝင်းမောင် နှင့် အဖွဲ့ https://www.youtube.com/watch?v=bebmS0ScU8Y
၅ ခါထက်မနည်းတော့။ နာရီပိုင်းလေးကတခုတင်သေးတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွေကို ပြန်ရိုက်ပြီး အွန်လိုင်း ဒေါင်းလုဒ်ဖိုင်ထဲမှာ မူလက ပဌမလို့ရေးတာအမှန်ကို ပထမလို့ပြင်ထားကြောင်း ပုံ ၂ခု တွဲပြတာ တနာရီသာသာ လောက်သာရှိသေးတယ်။ ဒိအရင် ၅ ခါလောက်တင်ပြီးသား။
တချို့က မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခွင်လို့ရေးနေကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတခွင်ဘုရားသမိုင်းပေါင်းချုပ် (လှသမှိန်)
ကစ္စာယနပဥှာဗျာကရဏဝိဘာဝနီခေါ်သဒ္ဒါကြီးရှစ်ဆောင် အမေးအဖြေကျမ်း ပဌမတွဲ
ပါဠိကလာတာနဲ့ သက္ကတကလာတာလို့လည်း ရှင်းပြထားပြီး။
ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းမှာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ မြန်မာစာကို သတ်ပုံမှန်နဲ့သာရေးသား သင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
ကွမ်းတစ်ယာလို့ မရေးပါ။ လ္ဘက်တစ်ပွဲလို့ မရေးပါ။ စလောင်းဖုံးတစ်ချပ်လို့ မရေးပါ။
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ နေကောင်းကျန်းမာပါစေလုို့ အရင်ဆုံး နုတ်ဆက်လုိုက်ပါတယ်။ ကျမလည်း နေကောင်း ကျန်းမာပါတယ်ရှင်။ ဒေါက်တာကုို နောက်တခါပြန်ပြီး အကြံတောင်းပါရစေရှင်။ ကျမ သူငယ်ချင်းတယောက် အသက် ၄၂ နှစ်ရှိပြီ သူက အစမှာ နောက်ဖခုံးမှာ နာတယ်ဆုိုပြီး အနှိပ်သည်နဲ့ နှိပ်ပါတယ်။ သက်သာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပုိုင်း ပြန်ပြန်နာလာတယ်။ အခုနောက်ပုိုင်း ဘယ်ဘက် ရင်သားမှာတခါတလေ စူးစူးပြီး နာတယ်ဆုိုပြီး ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရင်သား ဆေးစစ်ကြည့်မယ်ဆုိုပြီး ဒီလ အောက်တုိုဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ထုိုင်းနုိုင်ငံ ချင်းမုိုင်က ဆေးရုံတခုမှာ ရင်သား ကုို mammogram နဲ့ စစ်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီအောက်က အဖြေလွာထွက်လာပါတယ်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေကုို ရှင်းပြမဲ့ ဆရာဝန်နဲ့က နောက်ရက် ချိန်းထားပါတယ်။ မတွေ့ဖြစ်သေးပါဘူး။ စစ်ပေးတဲ့နေ့က ဆရာဝန်က စုိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။ ရင်သား နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အရွယ်သေးသေးလေး ရေအိတ်ပါဘဲဆုိုတာဘဲ ပြောတယ်။ ဆေးစာတွေ အရ အဓါယ်တွေ မသိလုို့ ဒေါက်တာ ဆီက အကြံတောင်းချင်ပါတယ်ရှင်။ ဒီလုို့ဖြစ်တာက စုိုးရိမ်ရလား။ ဘယ်လုို ကုသလုို့ရတယ်ဆုိုတာ တွေပါ အကြံပြုပေးပါ။ အဖြေလွာကုို အောက်မှာ အတခ်ျ့ဖုိုင်နဲ့ ပုို့လုိုက်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့်
ကင်ဆာ မတွေ့။ တနှစ်တကြိမ်စစ်ဆေးပါ။
ရင်သားကင်ဆာ လမ်းညွှန်ဟောင်း = အသက် ၄ဝ ကျော်ရင် အမျိုးသမီးတိုင်း Memogram နှစ်စဉ်ရိုက်ပါ။
ရင်သားကင်ဆာ လမ်းညွှန်သစ် = ၂ဝဝ၉ ကစပြီး USPSTF အဆိုအရ အသက် ၅ဝ ကနေစပြီး Memogram ရိုက်ပါ။ ACS အဆိုအရ အရင်လမ်းညွှန်အတိုင်းသာလုပ်ပါ။ မိသားစုမှာ ရင်သားကင်ဆာရာဇဝင်ရှိသူတိုင်း ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးပါ။
ဆေးစာပါ BI-RADS score ဆိုတာ Breast Imaging Reporting and Database System score ရင်သားစစ်ဆေးခြင်းစံနစ်ကို ခေါ်တယ်။ American College of Radiology ကနေတီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်။ Magnetic Resonance Imaging (MRI) နဲ့ breast ultrasound စစ်ဆေးနည်းတွေကိုအသုံးပြုတယ်။
Category2= ပုံမှန်။ ကင်ဆာမရတွေ့။ တချို့ကို ပုံမှန်ပြန်စစ်ဘို့ အကြံပြုမယ်။ မေးခွန်းပါလူနာအဖြေ။
Body Language Cues လူကိုဖတ်ခြင်း
စိတ်ပညာရှင်အသိနဲ့ ရေးမှာပါ။ ဗေဒင်လက္ခဏာလို မဟုတ်ပါ။ လူတယောက်ကို သူပြောနေတာကို နားထောင်ပြီး တန်းမယုံပါနဲ့။ သူဘယ်လိုအသက်မွေးဝမ်းပြုနေတယ်၊ ဘာရာထူးရှိတယ်၊ ဘာဘွဲ့တွေရထားတယ်ကိုကြည့်ပြီး၊ တန်းမယုံပါနဲ့။ ပြောတာကိုရော ပြောစကားထဲမပာတာကိုပါ ရအောင်ဖတ်ပါ။ ဖုံးထားတဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ မိက်ကပ်တွေခွါပြီး တကယ့်အစစ်ကို မှန်အောင်ကြည့်ပါ။ ကြိုတင်တင်ကူးယူဆထားချက်ကို ဘေးဖယ်ထားလိုက်ပါ။ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောက သုံးသပ်ချက်ကို အသုံးချပါ။
(၁) Observe Body Language Cues ကိုယ်အမူအယာဖတ်ခြင်း
သုတေသနတွေအရ လူတွေရဲ့ ကိုယ်အမူအယာဖတ်ခြင်းဟာ ၅၅% မှန်တယ်။ အသံအနိမ့်အမြင့်ဟာ ၃ဝ% မှန်တယ်။ အပြောစကားလုံးတွေဟာ ၇% သာမှန်တယ်။ (မှတ်ချက်။ သုတေသနထဲမှာ အရေးအသားမပါ။)
၁။ Pay Attention to Appearance အမြင်ကိုသတိထားပါ
ဘာဝတ်ထားလည်း။ တန်ဘိုးရှိလက်ဝတ်ရတနာတွေ၊ အင်္ကျီ၊ လုံခြည်၊ ဖိနပ်၊ စတာတွေကိုကြည့်ရင် ဘယ်လို ရည်မှန်းချက်နဲ့ ပွဲတက်လာသလည်းကို မှန်းနိုင်တယ်။ မိန်းကလေးတယောက် သူ့အသားအရေမြင်စေအောင် ဝတ်ထားရင်လည်း သိပါမယ်။ သာမန်ဝတ်စားထားရင် ခပ်ပေါ့ပေါ့နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးအတွက်ဖြစ်မယ်။ ယောဂီဝတ်စုံ အပါအဝင် ယူနီဖေါင်းတွေကနေလည်း ပြောပြနေမယ်။
ခေါင်းမော့ထားလား။ လမ်လျှောက်တာ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်းလား၊ ဟိုယိမ်းဒီယိုင်လား။ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှု နည်းတဲ့ပုံလား။ ခပ်ကြွားကြွာလား။
တခုခုကိုမှီနေတာလား။ သူတို့နှစ်သက်တဲဖက်ကိုညွတ်မယ်။ လက်ပိုက်ထားသလား။ အဲတာက ဒေသလား၊ သူ့ကိုသူ ကာကွယ်နေတာလား။ ခြေခြင်းချိတ်၊ထားလား။ သူအဆင်ပြေမယ့်သူဖက်ကို ခြေမတွေကဦးတည်ထားတယ်။ လက်တဖက်ဝှက်ထားလား။ အဲတာဆို တခုခုကိုဝှက်ထားတာဖြစ်မယ်။ လက်သည်း၊ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းကိုက်နေရင် သူ့မှာ ဖိအားသက်ရောက်ခံနေရတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်သိမ့်နေတာဖြစ်မယ်။
မျက်မှုံကုပ်နေရင် စိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်။ တခုခုကို တွေးတောနေမယ်။ မျက်စိအစွန်တွေမှယ ငှက်ခြေလိုဖြစ်နေတာက ကျေနပ်နေတာ။ အောက်နှုတ်ခမ်းကိုတာက ဒေါသထွက်နေတာ။ မေးကြောတင်းနေတာလည်း ဒေါသ။
(၂) Listen to Your Intuition ကိုယ့်အသိကနေဘာပြောနေလည်း
လူကြည့်တာနဲ့ အလိုလိုသိနေတာမျိုး အတွေ့အကြုံရှိသူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။
၁။ လူတယောက်ကို စတွေ့တွေ့ချင်း ဘယ်လိုမြင်သလည်းဆိုတဲ့ အမြင်တခုတည်းနဲ့ ကိုယ့်တိုင်အကဲဖြတ်ချက်ရှိတယ်။ ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေမယ့်သူလား မဟုတ်ဘူးလား။
၂။ ကြက်သီးထာတာဟာ ကြောက်စိတ်ရော၊ စိတ်တက်ကြွမှုရောဖြစ်မယ်။ တွေ့တာနဲ့ ကိုယ့်အရေပြားအသီးထတယ်၊ ကိုယ်မွှေးထတာဖြစ်မယ်။ တခါမှာမတွေဘူးကိုမြင်တော့ တွေ့ဘူးသလိုဖြစ်မယ်။
၃။ စကားပြောနေရင်း သူပြောလိုက်လို့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ဝင်းလက်သလိုဖြစ်တာကိုသိပါ။ ကျောထဲစိမ့်သွားစေတာမျိုး ရှိတယ်။ သတိနဲ့နားထောင်ပါ။ လွတ်ထွက်သွားတတ်တယ်။
၄။ စကားနားထောင်ရင်း စာနာစိတ်ဝင်လာမယ်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်မယ်။
(၃) Sense Emotional Energy စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာကိုသိပါ။ စိတ်မူဖြစ်ပေါ်မှုရှိမယ်။ အတူရှိနေရတာ မနေတတ်သလိုဖြစ်မယ်။ နေပျော်တာရှိမယ်။
၁။ အတူရှိနေတာဟာ အားတခုလိုဖြစ်သလား။ သူ့ဆီကနေကူးစက်လာတဲ့အားဖြစ်တယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ (မှတ်ချက်။ ဆန့်ကျဖက်လိင်သဘော ထည့်မပြောပါ။)
၂။ သူ့မျက်လုံးကို ဖတ်ပါ။ မျက်လုံးချင်ဆုံရင် အင်နာဂျီရသက်ရောက်သလား။ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းလိုဖြစ်မယ်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသလား။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရစေသလား။ ပြောင်းပြန်ခံစားသလား။
၃။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ၊ လက်ချင်းထိကိုင်တဲ့အခါ၊ ဖေက်လဲတကင်းလုပ်တဲ့အခါ သတိထားခံစားပါ။ နွေးထွေးမှုရသလား။ နေသာထိုင်သာရှိလား။ ပြောင်းပြန်လား။ (မှတ်ချက်။ ဆန့်ကျဖက်လိင်သဘော ထည့်မပြောပါ။)
၄။ အသံအနိမ့်အမြင့်ကို သတိထားပါ။ ရယ်သံကိုသတိပြုပါ။ အသံလှိုင်းတုန်ခါမှုကနေလာတာကို ခံစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုနှစ်သိမ့်စေသလား။ ပြောင်းပြန်လား။
ဆရာ အပ်နဲ့အတ်ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးရမလည်းဆိုတာ သိချင်လို့ပါဆရာ။ မိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့အပ်တာဆိုရင် အတ်လိုက်မယ်နဲ့ အပ်လိုက်မယ် ဘယ်ဟာအမှန်ပါလည်းဆရာ။
Add ဆိုတာ ဖရင်းအဖြစ်စာရင်းထည့်သွင်းပါလို့ပြောကြတယ်။ အသံထွက်က အဒ်ဖြစ်တယ်။ အပ်လို့လည်း မမှန်၊ အတ်လို့လည်း မမှန်ပါ။ အက်လို့လည်း မမှန်။ အဓိပ္ပါယ်က ထည့်တာ၊ ပေါင်းတာ။
အပ်က အပ်နှံသည်အဓိပ္ပါယ်ရလို့ သင့်ပေမဲ့ အသံထွက်ကိုယူတာ မဟုတ်ပြန်ပါ။ အပ်ထားတာက သိမ်းထားပေးပါ စောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ ဆိုလိုတယ်။ ကလေးကျောင်းအပ်တာနဲ့တူတယ်။ အပ်ပေးပါလို့ရေးရင် အဝတ်ချုပ်ဘို့လား တွေးမိတယ်။
Tortoise upside down မြန်ဂလိပ်
အီတလီလူမျိုးဆရာဝန်တဦးကို ယူကေနိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စာစစ်ဆေးမှုလုပ်တော့ကျလို့ လိုင်စင်သိမ်းခံရတယ်။ ဒေါက်တာ အယ်လက်ဆန်ဒရို တက်ပါး ဟာ ယူကေမှာ ၂ဝ၁၄ တုံးက ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့ ဥပဒေသစ်အရ အဲလို လိုင်စင်သိမ်းခံရတဲ့ ပဌမဆုံးအီးယူကဆရာဝန်ပါ။ စာမေးပွဲတွေစစ်ပြီးမှ အဲလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ သူကအီတလီကတည်းက အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတွေ ယူလာခဲ့ပါတယ်။ ပိုလန်ဆရာဝန် ဒေါက်တာတောမတ်ဇ် ဖရီဇွဲလ်ဝဇ် လည်း ယူကေမှာ (၉) နှစ် လာဆေးကုဘို့ လိုင်စင်ရထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူလည်း အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲ ၃ ကြိ်မ်ကျထားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပဒေအရ (၁၂) လအတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာစာမေးပွဲအောင်ရပါမယ်။
အင်္ဂလိပ်လူနာပြောတာကို ဆရာဝန်ကနားမလည်ရင် အသက်ကိုပါ စေသေနိုင်တယ်။ မြန်မာစကားလည်း အတူတူပဲ။ မြန်မာစကားကို မြန်မာလို မှန်မှန်ကန်ကန်မပြောနိုင်တဲ့ အရာထမ်း အမှုထမ်းတွေရှိတော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာခက်ခဲရတယ်။ တချို့အရာရှိတွေက သတ်ပုံမှန်ရေးတင်တဲ့စာကို ပြင်ခိုင်းနေကြသတဲ့။ စကားနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်တဲ့ မီဒီယာမှာ မပီကလာပြောနေကြတာကိုလည်း မသင့်လို့ထင်ပါတယ်။
ပြည်ပထွက်နေရ လုပ်ရသူတွေ မြန်မာလူမျိုး (၄) သန်းလောက်ရှိတယ်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲတွေ ရှိကြတယ်။ အခုထိ အင်္ဂလိပ်စာကို တိုင်းတပါးဆိုတဲ့တံဆိပ်ကပ်တဲ့သူက ကပ်နေသေးတယ်။ ကနေ့ခေတ်ဟာ ကိုယ့်ဟာမှမှန်တာ လုပ်နေရမယ့်ခေတ် မဟုတ်ပါ။ အဲ့့ ကိုယ့်စာနဲ့စကားကတော့ နံပတ်တစ်ဖြစ်တယ်။ ဖြစ်ကြပါသလား။
မြန်မာစာ မြန်မာစကားလို မှန်ကန်ပီသ၊ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောဆိုရေးသားတတ်ရပါမယ်။ မြန်ဂလိပ် ဆိုတာ ခေါင်းမဖော်ရဲတဲ့လိပ်နဲ့တူတယ်။ လိပ်ဆိုတာ ရေထဲမှာရော ကုန်းပေါ်မှာပါ သွားလာနေထိုင်သလို ကျွန်တော်တို့လည်း အတူတူပဲမဟုတ်ပါလား။
မြန်မာစာလုံးတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုရေးနည်း အရင်လိုမဟုတ်တော့ပဲ စစ်အစိုးရလက်ထက်ကစပြီး ပြောင်းထားတာကို မြန်ဂလိပ်လို့ခေါ်တယ်။
မြန်မာစာသတ်ပုံမမှန်ရခြင်းအကြောင်းတချက်ဟာ အင်္ဂလိပ်စာသင်နေရလို့တဲ့။ မှန်ပါရဲ့လား။ ညံ့ပြီဆိုမှတော့ အုပ်စုံညံ့တတ်တယ်။ မြန်မာလိုရော အင်္ဂလိပ်လိုပါ ကပျက်ကချော်ဆိုရင်တော့ လိပ်ကြီး ပက်လက်လှန်ထားသလို။
November Events နိုဝင်္ဘာမှတ်တမ်း
ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ နိုဝင်္ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မနက်ခင်းမှာ၊ မန္တလေးဘူတာကြီးကလာတဲ့ ကျောက်မီးသွေး မိုးခိုးနံ့ကိုရှူရင်း အရှေ့ဖက်ကို စက်ဘီးဆက်နင်းနေတယ်။ အရက်ပျံနဲ့ လိုက်ဇောနံ့သင်းနေတဲ့ မန္တလေးဆေးရုံကြီးရှေ့က ဖြတ်ရင်း ဖေါ်မလင်နုံ့ပြင်းရှိရာ ဆေးတက္ကသိုလ်မှာ ဖရက်ရှာခေါ် ကျောင်းသားသစ်လေးတယောက်ဟာ အားသစ်အင်သစ် အပြည့်နဲ့ရောက်လာပါတယ်။
သူဟာ နောင် (၇) နှစ်မှာ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့တခုတည်းသာ သိသေးတယ်။ နောင်ရေး မတွေးမိ။ နှစ်အစိတ်ရှိရင် နိုင်ငံရေးထဲ ဝင်ရမယ်လို့ကလည်း စိုးစဉ်းမျှ စိတ်ကူးထဲမှာမရှိ။ နောင် (၂၆) နှစ်တိတိမှာ ကိုယ့်မွေးရာတိုင်းပြည်ကြီးကို ကျောခိုင်းပြီး ထွက်ရလမ်းလည်း မှန်းမထားမိ။ အခုရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတာလည်း သူ့အိပ်မက်ထဲမှာ နတ္ထိ။
နိုဝင်္ဘာတညမှာ သူ့ကိုလာဖမ်းကြတယ်။ နိုဝင်္ဘာတရက်ကြောင့် ဆရာဝန်ဖြစ်။ နိုဝင်္ဘာတရက်မှာ မင်းပြေးဖြစ်။ နိုဝင်္ဘာဆိုတာ ကျွန်တော့်ဘဝမှာ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။
နိုဝင်္ဘာလမှာ ရာသီဥတု သင့်တင့်အေးမြလို့ ခြေခင်းလက်ခင်းသာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဆေးကျောင်းစတက်ရတာက ၁၉၆၅ နိုဝင်္ဘာလဆန်းတစ်ရက်နေ့ဆိုတာ မမေ့ပါ။
၇ နှစ်ကြာစာသင်ပြီးတော့ ဟောက်ဆာဂျင်ခေါ်တဲ့ အလုပ်သင်ဆရာဝန် လုပ်ရတာလဲ ၁၉၇၂ နိုဝင်္ဘာလထဲမှာပါ။ ဆေးမန်းက သူငယ်ချင်းတသိုက် မေမြို့စစ်ဆးရုံမှာ တာဝန်ကျကြတယ်။ မေမြို့ဆိုတာက နွေမှာတောင်အေးလို့ နိုဝင်္ဘာဘာလဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့လို အညာသားတွေအဖို့ အေးလွန်းနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စစ်ဆေးရုံထဲက အိုဟောင်းနေတဲ့ တိုက်တလုံးမှာ စုနေကြရပါတယ်။ ရေချိုးခန်းမှာ ရေနွေးပေးတာက ပျက်နေတော့ ရေချိုးဘို့ဆိုတာ စစ်ဆေးရုံထဲမှာ အရပ်သားတွေအချင်းချင်း သူရဲကောင်း ရွေးရသလိုပဲ။
အလုပ်ရပြန်တော့လဲ အရပ်သားတွေဟာ စစ်သားတွေကြားမှာ အထာမကျလှပါ။ အဲလိုပဲ အရပ်သားတွေကြားမှာလဲ စစ်ဗိုလ်စစ်သားတွေ အထာကျမှာမဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အထာမကျတာက ဟောက်ဆာဂျင်လုပ်ရတာ တနှစ်တိတိသာ ကြာလို့ ကံကောင်းတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေ နှစ်လေးငါးဆယ်ကြာ အုပ်ချုပ်နေတာ အထာမကျတော့ အရပ်သားလူအများမှာ အတော်ကို ကံဆိုးကြပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်တိတိက ဒီလိုညမှာ နှင်းပွင့်ဖတ်တွေ ကျခဲ့တယ်။ တမြန်နှစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ ဖလန်နယ်ရှပ်အင်္ကျီ လက်ခေါက်ဝတ်ပြီး လမ်းလျှောက်လို့ရတယ်။ မနှစ်ကတော့ ဆွယ်တာပါးပါးနဲ့ ကျောင်းသွားတယ်။ ကနေ့မှာ ဆွယ်တာမလိုသေး။ လရေးရေးနဲ့ ခပ်အေးအေးသာရှိပါတယ်။ မကြာမီ နှင်းဆိုတာ လာပါတော့မည်။
• လေလည်းရောရာ၊ မိုးမပါဘဲ၊
• သံဝါဖြောက်ဖြောက်၊ ဆီးနှင်းပေါက်လည်း၊
• မိုးလောက်ပြင်းထန်၊ သွန်းချပြန်သော်၊
• ဧကန် ဟေမန်လာချေပြီ၏တည်း။
မျှော် မြော် မြှော်
ဆရာ မျှော် နဲ့မြှော် သုံးစွဲပုံလေး သိချင်ပါတယ်။ မျှော်လင့် မြှော် လင့် အပေါ်ကယပင့်က မှန်မယ်ထင်ပါတယ်
၂၄-၉-၁၀၁၇ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာပါတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုက အရှေ့အဖုံးမှာကျတော့ ကမ္ဘာ့အရေးမြော်တွေးရှုဆ ကုလသမဂ္ဂ၊ အတွင်းပိုင်းမှာကျတော့ ကမ္ဘာ့အရေးမျှော်တွေးရှုဆကုလသမဂ္ဂ ဆိုပြီး ကွဲလွဲနေပါတယ်ဆရာ ဘယ်တခုက အမှန်ပါလဲဆရာ။
မျှော် = မျက်စိဖြင့်ကြည့်ရှုသည်
မြော်မြင် = ပညာမျက်စိဖြင့် အရှည်ကြည့်သည်
မြော်လည်းမရဲ = ကြည့်မြင်၍ မရောင့်ရဲနိုင်
မြော်သည် = မြင်သည်၊ ကြည့်သည်၊ တွေးခေါ်သည်
မြော်တွေးသည် = မြော်ထောက်သည်၊ မြော်လင့်သည်
မြှော်တလင့်လင့် ရွှေဥဒေါင်းစာအုပ်အဖုံးက မြန်မာစာသတ်ပုံကို တင်ပြပါတယ်။
နိုဝင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့
လူတိုင်းဟာ ဘဝတသက်တာမှာ ကျောင်းစတက်ရတဲ့နေ့ကို မမေ့တတ်ကြပါ။ ကျွန်တာ် သူငယ်တန်း စတက်ရတဲ့ နေ့ကိုတော့ မမှတ်မိပါ။ အလည်ပြန်တော့ အဲဒီမူလတန်းကျောင်းကို ရောက်အောင်သွားခဲ့တယ်။
နိုဝင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့ဆိုရင် ကျွန်တော့်မှာ မမေ့စရာတခုရှိပါတယ်။ ၁၉၆၅ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာ (၁) ရက်နေ့မှာ ဆေးကျောင်းသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဝင်စ အေးမြမြရှိတယ်။ ကြည့်လေရာရာ မြူမှုန်တွေနဲ့ ခပ်ဝါးဝါးသာမြင်ရတယ်။ မန္တလေးဘူတာကြီးကလာတဲ့ ကျောက်မီးသွေး မီးခိုးနံ့က ရနေသေးတယ်။
ကောလိပ်ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့အတူ သူငယ်ချင်းသစ်တွေ တွေ့ရတယ်။ သူတို့အားလုံးနဲ့ သိရခင်ရတာ (၅၃) နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လို့ ပြောနိုင်ပြီ။
အလည်ပြန်တော့ မန္တလေးဆေးကျောင်းရှေ့က လေးငါးခေါက်ဖြတ်ရပေမဲ့ အထဲမဝင်ခဲ့ရပါ။ ကိုယ့်သိသူမရှိ။ ကိုယ်ကသိသူလည်း မရှိလောက်။ အဲဒီကျောင်းမှာ ဆေးပညာမူလတန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။
အွန်လိုင်းမှာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်တဲ့စာအုပ်တွေ အများကြီးတင်ထားကြတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေက အတော်ကို တန်ဖိုးရှိတယ်။ တချို့စာအုပ်တွေကတော့့
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း (ဦးနု) လိုတင်ထားတကို နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုက ပြုစာထားခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ ကျွန်တော်က မူရင်းစာအုပ်တစုံလုံးကို အခုတိုင်းပြည်အထိ ရအောင်သယ်ယူလာခဲ့ပါတယ်။
အွန်လိုင်းတင်ထားတာမှာ ပြင်ထားတယ်။ နမူနာနည်းနည်းလေးသာ ထောက်ပြပါမယ်။ အတွဲ (၁) စာမျက်နှာ (၁)။
မူရင်းစာအုပ် = ကကတစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတလျှောက်၌တွေ့ရသော အရေးကြီးသည့် စားငါးတမျိုးဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းစာအုပ် = ကကတစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတစ်လျှောက်၌တွေ့ရသော အရေးကြီးသည့် စားငါးတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။
တ နှစ်လုံးကို တစ် လို့ပြင်ထားတယ်။
မူရင်းစာအုပ် = ဘုရားငါးဆူပွင့်ရာ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာအတွင်း ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီး ဘုရားလေးဆူအနက် ပဌမဆုံးပွင့်တော်မူသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းစာအုပ် = ဘုရားငါးဆူပွင့်ရာ ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာအတွင်း ပွင့်တော်မူခဲ့ပြီး ဘုရားလေးဆူအနက် ပထမဆုံး ပွင့်တော်မူသော ဘုရားရှင်ဖြစ်သည်။
ပဌမ ကို ပထမ လို့ပြင်ထားတယ်။
အချက်အလက်လည်းမမှန်၊ သတ်ပုံတွေလည်းလွဲအောင်ပြင်ထားခြင်းဟာ မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာလို့ အခိုင်အမာ ယူဆပါတယ်။
High School Drop Out အတန်းပညာ ပမာမထား အောင်မြင်ကြသူများ
အထက်တန်း လောက်တက်ခဲ့ဖူးသူတချို့က ဘွဲ့လွန် ရထားတဲ့ သူတွေထက် အသိဉာဏ် တွေးခေါ်မှုပိုင်း သာတဲ့သူ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိလားဆရာ။
1. Abraham Lincoln left school at 12 to help his family farm, and then he became THE PRESIDENT.
2. After failing every subject except English, Al Pacino dropped out of his New York high school to pursue acting.
3. Aretha Franklin dropped out at 15.
4. Before YOLO, there was POLO. Ralph Lauren left Baruch College after two semesters to serve in the U.S. Army.
5. Bill Gates dropped out of Harvard to pursue his love of poetry. Just kidding, he founded Microsoft.
6. Brad Pitt was set to beaJOURNALIST when he dropped out of the University of Missouri two weeks before graduation.
7. David H. Murdock dropped out at 14.
8. David Karp dropped out at 15.
9. F. Scott Fitzgerald left Princeton University because of poor grades.
10. Fierce songstress Natasha Bedingfield withdrew from the University of Greenwich afterayear to focus on singing. Good choice.
11. Francois Pinault dropped out at 11.
12. Funny lady Ellen DeGeneres dropped out of the University of New Orleans after just one semester. Guess she got the last laugh after all.
13. George Foreman dropped out at 15.
14. James H. Clark dropped out at 16.
15. Jim Carrey dropped out of high school at just
16. Alllrighty then!
16. Joe Lewis dropped out at 15.
17. John Lennon was expelled from Liverpool College, so he joinedaband.
18. John Mayer dropped out of Berklee College of Music, only to come back later and major in sex appeal.*
19. Lady Gaga dropped out of NYU after her freshman year, probably because she was busy plotting her world takeover.
20. Mark Zuckerberg left Harvard to invent that site you spend way too much time on.
21. Media mogul Russell Simmons dropped out of Manhattan City College just shy of finishing his sociology degree.
22. Mike Hudack dropped out at 16.
23. OPRAH dropped out of Tennessee State University and seems to be doing all right.
24. Philip Emeagwali dropped out at 13.
25. Quentin Tarantino dropped out at 15.
26. Richard Branson dropped out at 15.
27. Steve Jobs dropped out of Reed College to become the father of all things Apple.
28. Ted Turner, the creator of the 24-hour news cycle, was expelled from Brown University after he was caught withagirl in his room. GASP!
29. Tom Hanks left Sacramento State to intern full time at the Great Lakes Theater Festival. You can't make that stuff up.
30. Walt Disney dropped out of high school at 16, joined the Red Cross, and left for Europe.
31. Whole Foods CEO John Mackey dropped out of the University of Texas after seven years... It was probably time to leave at that point.
32. Wolfgang Puck quit school at the ripe young age of 14 to becomeacooking apprentice atahotel.
သူတို့အာလုံးမှာ စိတ်ဝင်စားစရာ ဇာတ်လမ်းကိုယ်စီရှိတြတယ်။
ဆရာရှင့်။ ကလေးကတနှစ်ခွဲ ယောက်ျားလေးပါ။ နေကြာစေ့လိုအစေ့အဆံတွေကျွေးရင် ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေတယ်လို့ ပို့စ်တခုမှာဖတ်ဖူးပါတယ်။ တချို့ကလည်း ကလေးငယ်ရင် မကျွေးရဘူးလို့ပြောကြတယ်။ ကျွေးလို့ရမရ သိပါရစေဆရာ။
ဘယ်စာမဆို ဘယ်သူရေးသလဲ သိရမယ်။ ဆေးပညာနဲ့ ကျန်းမာရေးစာ ဆရာဝန်ရေးတာ ဟုတ်ရဲ့လား သိရမယ်။ သတင်းကို လူလေးစားခြင်းခံရတဲ့ သတင်းဌာနကလာတာ ဟုတ် မဟုတ် သိရမယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ဆိုတာ သာလာယံဇရပ်လိုပဲ။ လူ ၂ ယောက် တပိုင်းကပြောတာကို နာမည်ကြီးလို့ဆိုပြီး နေ့တိုင်းမေးနေကြတယ်။
လမ်းဘေးမှာ လော်စပီကာနဲ့အော်တိုင်း အမှန်တွေလို့ မထင်ပါနဲ့။ စင်မြင့်ပေါ်မှာ ပရိုဂျက်တာနဲ့ထိုးပြတိုင်း ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်ပါမယ်။
ဆရာဝန်တောင်မှ သက်ဆိုင်ရာရောဂါအတွက် အထူးကုဆရာဝန်က ကျွန်တော်လို ရိုးရိုးဆရာဝန်ထက် ပိုမှန်တယ်။
သင့်အသံ တုန်ရီနေပေမဲ့ အမှန်ကိုသာပြောပါ။
ASV မြွေဆေး သို့မဟုတ် ဝေါဟာရနိုင်ငံရေး
လူရင်းတယောက်ကတင်ထားတယ်။ တချိန်ကတိုင်းပြည်မှာ BPI ဆေးဟာ ပြည်ပထိနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ အခုပြန်လုပ်ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီတဲ့။
မဆလ ခေတ်မှာ တခုတည်းသာရှိတဲ့၊ ဘီပီအိုင်ကနေ ဆေးတွေထုတ်တယ်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်ခေတ်စက်ရုံတွေ ရာထောင် ရှိခဲ့တာထဲမှာ တခုတည်းသော အရည်အသွေးမီစက်ရုံဖြစ်တယ်။ ဆေးရုံတွေက ခွဲတမ်းနဲ့သာဆေးတွေရတယ်။ ဆေးဂိုထောင်က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ခင်အောင်မင်အောင် ပေါင်းခဲ့လို့ မြွေဆေး လုံလောက်လုနီးပါးရခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်က လူနာတွေအတွက် ဘီပီအိုင်ကထုတ်တဲ့ မြွေဆေးကို အမေရိကန်ထုတ် အင်္ဂလန်ထုတ်တွေက မမီပါ။ ကိုယ့်မြွေနဲ့ထုတ်တဲ့ဆေးဖြစ်လို့။
အခု ဘီပီအိုင်အမည်နဲ့ လုပ်နေပြီလို့ မေးခွန်းတွေအရသိရတယ်။ ဘီ ကို အင်မ် ပြောင်းလို့ ပိုမကောင်းနိုင်တာတွေ အများကြီးတွေ့ရတယ်။ အဲလိုမပြောင်းရင် လုပ်ခွင့်မရှိတဲ့။
တနေ့က ကုမ္ပဏီအမည်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်း တယောက်က မေးပါတယ်။ ယျ ကို ဘယ်လိုပေါင်းမလဲတဲ့။ ဝိုင်အေ နဲ့ ပေါင်းမရတဲ့။ ဟာ့့ ဘာလို့လဲ။ အရင်တခုက အဲဒီစာလုံးပေါင်းနဲ့ မှတ်ပုံတင်ပြီးသားရှိလို့တဲ့။ အော့့်
ဝေါဟာရကို နိုင်ငံရေးလုပ်တာနဲ့ အလုပ်များနေကြတယ်။ အရေးကြီးတာက မြွေဆေးကောင်းကောင်းကို လုံလောက်အောင် ထုတ်ဖို့သာဖြစ်တယ်။
ဆေးကျောင်းနေဘက်တယောက်က သြစတြေးလျရောက်နေသတဲ့။ အဲဒီနေရာတခေါက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ခြေရာ ရှာခဲ့ပါ။
သမီးကလည်း ကမ္ဘောဒီးယားရောက်နေသတဲ့။ အဲဒီကို ၄-၅ ခေါက်ရောက်တယ်။ အန်ကာဝပ်မှာ အဖေ့ခြေရာကျန်ခဲ့တယ်။
ပြည်ပြေးတယောက် ဟိုရောက်သည်ရောက်။ ခြေရာတွေသာ ထပ်လိုက်ရင် မင်းရွာနဲ့ ကျောက်တောင်ကြားက ယမားချောင်းထဲက လက်ယက်တွင်းထက် နက်မယ်။
လက်ယက်တွင်းရေ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ခပ်ယူရတယ်တယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးမှာ ရေတစက်နှစ်စက်ထွက်ဖို့ရာ နှစ် ၂ဝ ကျော်ကြာခဲ့တယ်။
သားတယောက်က လှမ်းပြောတယ်။ ဦးဘိုးလှိုင်ရဲ့ ဥတုဘောဇန သင်္ဂဟကျမ်း ရောက်လာပြီဗျ။
အော့့် ပြင်ရိုက်လား
ဟုတ်မယ်။ ၁၉၉၆ ထုတ်
ရွှေပြည်ဝန် ယောအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင်ရဲ့စာအုပ်ကို ဒုတိယအကြိမ်ရိုက်နှိပ်စဉ်က စစ်အစိုးရလက်ထက်ထုတ် မြန်မာစာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်းအတိုင်း ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေခဲ့ရကြောင်း ပါရှိပါတယ်။ မူရင်းကျမ်းကို ဦးဘိုးလှိုင်ရဲ့ ရေးထုံးမူအတိုင်း ထားရှိပါသည်လို့လည်းပါရှိပါတယ်။ အဲလိုတိကျရှင်းလင်းစွာ ရေးသားဖေါ်ပြထုတ်ဝေခြင်းဟာ အလွန်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။
ခုခေတ်မှာ သတ်ပုံပြင်ထုတ်စာအုပ်တွေက ပြင်ထုက်ပြန်ထုတ်တွေပဲ မှန်သလိုလို ရောင်ဝါးဝါးလုပ်နေကြတယ်။ ပညာရှိရာမကျကြောင်းပါ။
အောင်းမေ့လား အောက်မေ့လားဆရာ။ မောင်နှစ်မလား မောင်နှမလားဆရာ။
နှမိနှမြော = စုံမက်ချစ်ခင်ခြင်း
နှရွဲ = ရှုံ့မဲ့၍ငိုသည်
နှရား = ကြော်ဖွယ်လုလု၊ ကြောက်ကြိမ်းသည်
နှမြော = စုံမက်မြတ်နိုင်းသည်
Prenatal Diagnosis of Microcephaly ကိုယ်ဝန်မှာ ကလေးဦးခေါင်းအရွယ် စစ်ဆေးခြင်း
မင်္ဂလာပါဆရာ။ သမီးက အသက် ၃၅ နှစ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဦးပါ။ ဇီကာပိုးရှိတဲ့ခြင် ကိုက်ခံရရင် တချို့က ရောဂါလက္ခဏာပြတယ်၊ တချို့ကမပြဘူးလို့ သိထားပါတယ်။ သမီးသိချင်တာက ဇီကာဖြစ်ပင်မယ့် ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးဆိုရင် Ultrasound ရိုက်ခြင်းဖြင့် ဇီကာဖြစ်နေကြောင်း သိနိုင်ပါလားဆရာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Ultrasound ရိုက်တဲ့အခါ ကလေးဦးခေါင်းပိုင်း အတိုင်းအတာ (HC) ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကလေးဟာ ဦးခေါင်းသေးနေလား ပုံမှန်လား သိရခြင်းဖြင့် ဇီကာဖြစ်မဖြစ် ခန့်မှန်းနိုင်သလားလို့ပါ။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန် ၈လ/၉ လမှာ Ultrasound ရိုက်တဲ့အထိ HC ပုံမှန်ဆိုရင် ဇီကာမဖြစ်ဘူးလို့ ယူဆလို့ရနိုင်ပါသလားဆရာ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းမှာ အာလ်ထွာဆောင်းရိုက်တယ်။ အများအားဖြင့် ကိုယ်ဝန် ၁၈ ပတ်နဲ့ ၂ဝ ပတ်မှာစရိုက်ပါတယ်။ အထဲကကလေးမှာ Microcephaly ဦးခေါင်းအရွယ်အစား သေးနေတာနဲ့ Intracranial calcifications ဦးခေါင်းတွင်း ကယ်လ်စီယန်ဖြစ်စဉ်ကိုတော့ ၃ လနဲ့ ၆ လကြားမှသာသိမယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင် ကလေးဦးနှောက်သေးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခေါင်းသေးတာသာမက တခြားဦးနှောက်ရောဂါလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ ကလေးအထဲမှာ ဆုံးတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
အာလ်ထွာဆောင်းအဖြေ ဘယ်လောက်တိကျသလဲ မပြောနိုင်သေးပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်က ဝလွန်းတာ၊ စက်က ဟောင်းတာ၊ နည်းပညာ စတာတွေအပေါ်မူတည်မယ်။ လေ့လာမှုတခုအရ ဇီကာကြောင့် မဟုတ်ပဲခေါင်းသေးတာမှာ ၅၇% သာမှန်ခဲ့တယ်။
ဗီကာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက်က ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ မပြောနိုင်သေးပါ။ သတိပိုထားဘို့တော့ အကြံပြုထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်မှာ ဇီကာပိုးကူးစက်ခံရတိုင်းလည်း အဲလိုကလေးမွေးမယ်လို့ မဟုတ်ပါ။ ပြင်သစ်ပိုင် ပိုလီနီးရှားကျွန်းမှာ ၁% ကနေ ၁၃% သာ ခေါင်းသေးတဲ့ကလေးမွေးတာ တွေ့ရတယ်။ ဘရာဇီးမှာ ၂၉% တွေ့တယ်။
အာလ်ထွာဆောင်းအပြင် Real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR) စစ်ဆေးနည်း၊ Immunoglobulin M (IgM) စစ်ဆေးနည်းနဲ့ Plaque reduction neutralization (PRNT) tests စစ်ဆေးနည်းတွေ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တိကျမှန်ကမှုကို သုတေသနအဆင့်မှာသာရှိတယ်။
Zika virus ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရရင် ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။
- Fever ကိုယ်ပူမယ်။
- Rash အရေပြား အနကွက်ထွက်မယ်။ (အလာဂျီလို မဟုတ်ပါ)
- Joint pain အဆစ်တွေနာမယ်။
- Conjunctivitis မျက်စိနာမယ်။
- Muscle pain ကြွက်သားတွေနာမယ်။
- Headache ခေါင်းကိုက်မယ်။
- Pain behind the eyes မျက်စိနောက်နေရာနာမယ်။
- Vomiting အန်မယ်။
ဇီကာကာကွယ်ဆေးလည်း မပေါ်သေးပါ။ ခြင်မကိုက်အောင် သတိထားပါ။ ခြင်နှိမ်နင်းရေးလုပ်ပါ။ ကူးစက်မှုဖြစ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ပါနဲ့။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင် သတိရှိပါ။ လိုတာထက် ပိုမကြောက်ပါနဲ့။ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးသူတွေ မှန်ကန်တိကျပါစေ။
ဒေလီမှာနေစဉ်ကဖွင့်ခဲ့တဲ့ ယမုန်ဆေးခန်းက ဆရာမလေးတယောက်က တင်ထားတယ်။ သူက တီးတိန်သူ၊ ခရစ်ယန်။
မတတ်တခေါက် တက်တခေါက်နဲ့ အရိုနချာ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေကို တရားသွားဟောခွင့်ရတယ်
မတတ်တတတ်လို့ ရေးရတယ်။ မတောက်တခေါက်လို့ ရေးရတယ်။ တစ်ခေါက်လို့မရေးတာ ရွှေဗမာတွေထက် မှန်တယ်။
ဆေးမန်းမှာ အတူစာသင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ကရေးတာလို့ တခြားသူငယ်ချင်းကတင်ပေးထားတာတွေ့တယ်။ ကျေးဇူး။
တစ်ခဏသာ၊ နေ့တစ်ဒူဝလို့ မရေးသူသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်၏။ မကြာမီ တစ်ရားလို့ ရေးကြတော့လတ္တံ။
အဲ အဲ့ အိုက် အာ
၁။ ဆရာရှင့် အသက်က ၂၂ ပါ ရာသီရက်မမှန်လို့ပါရှင့့့် အိုက်တုံးကလဲရက်ကျော်လို့စိတ်ပူပြီးဆီးစစ်ခဲ့ပေမယ့့့်
၂။ အိုက်ကလည်း အစားထိုး စာလုံးတခုတိုးတာဖြစ်မယ်ထင်ရဲ့
အိုက်ဆိုတာ ပူအိုက်သည်၊ အိုက်စပ်စပ်၊ အိုက်စပ်ပူလောင်။ အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းကို အလွယ်ခေါ်တာ အိုက်။
၃။ သမီးက ဒုတိယကိုယ်ဝန်လိုချင်ပါတယ် တားဆေးလည်းမစားပါဘူးရှင့် သက်ဦးခလေးတုန်းက ၁နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာ ၅နှစ်ခံထည့်ထားပါတယ် အာလာထုတ်ပီကတည်းက ကိုယ်ဝန်မရတာဘာကြောင့်ပါလဲ့့
သက်ဦးခလေး မဟုတ်။ သားဦးကလေးလို့ ရေးရတယ်။ အာလာထုတ်ပီ မဟုတ်။ အဲတာထုတ်ပြီးလို့ ရေးရတယ်။
အဲတာ၊ အဲဒါလို့ ပြောကြတယ်။ အဲတာက စာဆန်တယ်။ အဲဒါက စကားပြောဆန်တယ်။ အဲဒီဟာ၊ အဲသည်ဟာ၊ အဲဟာလို့လည်းပြောကြတယ်။ ဟာဆိုတာ မရေတာတခုခု။ တာက သေချာတယ်။
အဲ့လို့ရေးရင် အောက်မြင့်က ၏သဘောဖြစ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဆိုးတယ်။ အညစ်အကြေးကို အဲ့အဲ့လို့သုံးပါတယ်။ ကလေးငယ်လေးတွေကို မထိမကိုင်စေချင်ရင် အဲ့အဲ့တွေလို့ ပြောကြတယ်။
သတ်ပုံစာအုပ်တွေမှာ အဲတာလည်းမပါ။ အဲဒါလည်းမပါ။ အဲ့တာလည်းမပါ။ စကားအသုံးတွေသာဖြစ်တယ်။ ဤ၊ ၎င်း၊ ယင်း၊ အနှီ၊ ထို၊ သဘောသုံးတယ်။ ပြောပြီးသားအရာလို့ ပြောတဲ့သူရော နားထောင်သူက သိနိုင်တာမျိုးကိုသုံးတယ်။
အဲခိုး = အားထုတ်သည်
အဲမောင်း = လှံရှည်
အဲ့အဲ့ = ရွံစရာ
ဒါသ = ကာလီဒါသ
Trafficking for Organ Trade ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ရေး
ဒေါက်တာ ဦးတင့်ဆွေရှင့် အာအက်အေက ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ မှောင်ခိုဈေးကွက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း ဆရာ့ရဲ့ ဆွေးနွေးချက်ကို နားဆင်လိုက်ရပါတယ်။ ဆရာက ဆရာဝန်လဲဖြစ် ၁၉၉ဝ အနိုင်ရအမတ်၊ နိုင်ငံရေးသမားလဲဖြစ်လို့ ဒိကိစ္စကိုစဉ်ဆက်မပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပေးပါရန် အထူးမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ မြန်မာပြည်အတွက် issue အသစ်တခုဖြစ်လာနိုင်တာသေချာပါတယ်။ ဆွေးနွေးချက်များကို ကျွန်မတို့လဲ သဘောတူပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါဆရာ။ လေးစားစွာဖြင့်
ကျေးဇူး။ RFA ကနေမေးလို့ လက်တန်းဖြေလိုက်ရပါတယ်။ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ရေးဂိုဏ်းတခု ဖမ်းမိတဲ့သတင်းနဲ့ ဆက်မေးတာဖြစ်ပါတယ်။
အဓမ္မခိုင်းစေမှု၊ လူမှောင်ခိုမှု၊ ကလေးသူငယ်ရောင်းဝယ်မှု၊ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ကလေးသူငယ်တွေကို လိင်အတွက် ရောင်းဝယ်မှု စတာတွေနဲ့အတူ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှောင်ခိုရောင်းဝယ်ရေးဖြစ်လာပါတယ်။
ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း မှောင်ခိုရောင်းဝယ်တာဟာ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ခံရသူဆိုတာ အသက်အရွယ်မရွေးပါ။ ကျောက်ကပ်၊ အသည်းတွေကိုအများဆုံးဖြစ်တယ်။
(၃) မျိုးရှိတယ်။ ပဌမအမျိုးအစားမှာ အတင်းအကြပ် ဒါမှမဟုတ် လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီးလုပ်တာ။ နောက် လှူမဲ့၊ ရောင်းမဲ့သူကနေ ဘောင်ဝင်အောင်ဖြစ်စေ၊ ဘောင်မဲ့ဖြစ်စေပေးတာ။ တန်ရာတန်ကြေးရချင်ရမယ်၊ နည်းချင်လဲ နည်းမယ်။ နောက် ကာယကံရှင်က မသိလိုက်ပဲနဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူတာခံရတာဖြစ်တယ်။
ရာဇဝတ်မှုကို အုပ်စုလိုက်လုပ်ကြပါတယ်။ တချို့က သားကောင်းလိုက်ရှာကြတယ်။ ဆေးရုံတွေမှာ အလုပ်လုပ်နေသူတွေ၊ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေလဲပါမယ်။ ကြားပွဲစားတွေရှိမယ်။ ငွေကြေးရင်းနှီးသူတွေရှိမယ်။ ကန်ထရိုက်သမားလဲရှိတယ်။ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းထားသိုတဲ့ဘဏ်တွေလဲရှိသေးတယ်။
ဒီလိုကုသမှုဟာ လူနာအတွက် အသက်ကို ကယ်နိုင်လို့ အလွန်မတန်အကျိုးရှိလှပါတယ်။ လှူတဲ့သူမှာလဲ မွန်မြတ်တဲ့ ပြုနိုင်ခဲလှတဲ့ ဇီဝိတဒါနမှုကို ပြုရာရောက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဘာလို့ ဥပဒေကနေတားရသလဲ။ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း ပေးလှူသူတွေထဲမှာ အမျိုးမျိုးရှိနေလို့ပါ။ စေတနာသုံးတန်ပြဌာန်းလို့လှူသူတွေအတွက် သာဓုခေါ်ရတယ်။ ဆင်းရဲလို့ ငွေကြေးလိုချင်လို့လှူရသူကိုလဲ အပြစ်ဆိုဘို့ရာမသင့်ပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုလူတွေအပေါ်ကနေ ဖြတ်စားသူတွေရှိတယ်။ အဆုံးဆုံးတခုက ကိုယ့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို ထုတ်ယူလိုက်တာကို မသိလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
လှူသူတွေနဲ့ ရောင်းသူတွေအပြင် အဲလို မသမာနည်းနဲ့လုပ်တာတွေက ဆင်းရဲတဲ့တိုင်ပြည်တွေက အများဆုံးဖြစ်နေတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့အထဲ ဆိုးတာက မသမာမှုနဲ့ အကတိလိုက်စားမှုပါတာ၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအတွက် ကုလသမဂ္ဂကနေပြဌာန်းချက်တွေ ထုတ်ထားတာရှိတယ်။
၁။ UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons
၂။ Optional Protocol on the sale of children, child prostitution and child pornography (2000) to the UN Convention on the Rights of the Child (1989)
၃။ Guiding Principles on Human Organ Transplantation (1991) of WHO
၄။ Additional Protocol to the European Convention on Human Rights and Biomedicine Concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (2002)
ချမ်းသာတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ ဥပဒေတင်းကြပ်လို့ အလှူရှင်မရနိုင်လို့ အချိန်အကြာကြီးစောင့်ကြရတယ်။ တချို့က အိန္ဒိယနဲ့ ထိုင်းကိုလာပြီး ဆေးကုကြတယ်။ လှူတဲ့သူရှာရခက်လို့ ဝယ်ကြတယ်။ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းကို အားပေးရာကျနေပြန်တယ်။
ဥပဒေကြောင့် လူနာမှာ နစ်နာစေနိုင်တယ်။ သူများနိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မတူပါ။ ဥပဒေဆိုတာ လိုရင်ပြင်နိုင်တယ်။ အပြန်အလှန်တင်ပြ၊ ငြင်းခုန်၊ မဲပေးသူကို တကယ်ကိုယ်စားပြုတဲ့ပါလီမန်မှာ အခြေတင်ဆွေးနွေးကြတယ်။ ကင့်ပိန်း လုပ်သူတွေကလုပ်ကြ၊ မီဒီယာကနေလဲဝင်ကူကြနဲ့ ပိုကောင်းတဲ့ဥပဒေကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်။
အမေရိကမှာ ကျောက်ကပ်လဲဘို့ ပျမ်းမျှ ၃ နှစ်ကနေ ၅ နှစ်စောင့်ရတယ်။ ဂျာမနီမှာ ၆ နှစ်။ သူတို့ဆီမှာ
United Network for Organ Sharing ဆိုတဲ့ အမြတ်မယူအဖွဲ့အစည်းမျိုးက စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ၂ဝ၁ဝ တုံးက WHO ဖေါ်ပြချက်တခုအရ ကျောက်ကပ်ပေါင်း ၁ဝဝဝဝ မှောင်ခိုရောင်းဝယ်မှုရှိခဲ့တယ်။ တနာရီမှာ ကျောက်ကပ်တခုနှုန်းနဲ့ညီတယ်။
ဥရောပနိုင်ငံတွေအတွက် မှောင်ခိုလုပ်ငန်းကို အီဂျစ်၊ ကိုဆိုဗိ်ုနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံတွေကနေလာတယ်။ ဥပမာ ကိုဆိုဗိုက ကျောက်ကပ်လှူသူဟာ ဒေါ်လာ ၁ဝဝဝဝ ရပြီး လူနာပေးရတာက ဒေါ်လာ ၁၃ဝဝဝဝ ဖြစ်တယ်။ တရုတ်ပြည်မှာ ကျောက်ကပ်လိုနေသူပေါင်း ၁့၅ သန်းရှိတယ်။
မြန်မာပြည်ကလူနာတွေ ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း အစားထိုးကုသမှုခံယူဘို့ရာ အများစုသွားကြရတာက အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံတွေကိုဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုအရာတွေမှန်သမျှ အားနည်းတာနဲ့ မဖြစ်နိုင်တာတွေသာများတယ်။ လူနာအတွက် ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေ အလွယ်တကူမလဲနိုင်ကြပါ။
ဒါကြောင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး မလုပ်တဲ့၊ အဂတိလိုက်စားမှု လွန်ကဲတဲ့၊ အာဏာယူထားသူတွေကို အစားထိုးလဲလှယ်ရေး လုပ်နိုင်မှသာ မြန်မာပြည်ကလူနာတွေ ချမ်းသာရာရမယ် ထင်ပါတော့တယ်။
Interviews အသံကြား အားတက်ပါစေ
တချိန်က BBC မှာ ဆရာ လွှင့်ဖူးသလားလို့ပါ BBC လား BOA လား သမီးငယ်ငယ်ကတည်းက ဒေါက်တာတင့်ဆွေဆိုတဲ့ နာမည်ကို ကြားဖူးတယ် အသံလွှင့်ဖူးတယ်လို့ ထင်လို့ပါဆရာရှင့် သမီးငယ်ငယ်ကဆို ရေဒီယို အမြဲ နားထောင်ခဲ့တာလေ
ဟုတ်တယ်။ အရင်က BBC, VOA, RFA, DVB ရေဒီယိုတွေက မကြာခဏ မေးလို့ ဖြေခဲ့တယ်။
ပြည်ပနိုင်ငံရေးကာလ ၁၉၉၁ ကနေ ၂ဝ၁၄ အထိကြာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်က အိန္ဒိယမှာနေခဲ့တယ်။ အဲဒီ ပြည်ပရေဒီယိုတွေကနေ မေးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အိန္ဒိယမှာဆောင်ရွက်နေတာတွေကိုမေးတယ်။ DVB TV ပေါ်လာတော့လည်း အသံသာမက လှုပ်ရှားမှုတွေပါ လွှင့်ပေးပါတယ်။ အဲတော့မှ ရွာကအမျိုးတွေက ကျွန်တော် သေပြီလိုလို ထောက်လှမ်းရေးကသတင်းလွှင့်တာ ကြားနေရတာမို့ ဝမ်းသာကြသတဲ့။ ကျေးဇူး။
ဒေလီမြို့မှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လွှင့်တဲ့ တီဗွီတွေကနေလည်း အတော်များများဖြေခဲ့ရသေးတယ်။ တခါတခါ စတူဒီယိုတွေအထိသွားပြီး စကားပြိုင်ပြောရတယ်။ ဒေါ်စုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကလွတ်တော့ ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်အထိ ကားခေါင်မိုးမှာ စလောင်းကြီးနဲ့ လာပြီးဗျူးတယ်။ အိမ်ရှေ့လမ်းက သိပ်မကျယ်လို့ ကျယ်တဲ့လမ်းဆုံမှာ ကုလားထိုင်တလုံးနဲ့ ဖြေရတယ် တချို့က ဘောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်ရိုက်တာမှတ်နေကြတယ်။ Smile!
၂၀၀၇ သံဃာတော်များလှုပ်ရှားမှုကာလမှာတော့ စတူဒီယိုတခုကနေ နောက်တခုကူးပြီး အင်တာဗျူးတယ်။ စားစရာကို တက်စီပေါ်မှာစားရတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကာလတုန်းကတခါ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ VOA စတူဒီယိုကနေ ဆွေးနွေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
၂၄ နှစ်တာကာလအတွင်း နိုင်သလောက် လုပ်ခဲ့တာတွေပါ။ အသံကြား၍ အားတက်ကြပါစေ။
ဘုရားစင်ပုံနဲ့စာတင်တိုင်း လာတတ်တဲ့ကွန်မင့်တွေရှိတယ်။ နမူနာနည်းနည်းသာထည့်ပါမယ်။
၁။ ဘုရားကျောင်းဆောင် (ဘုရားစင်လို့ရေးတာအောက်က ကွန်မင့်)
၂။ ဆရာ တခုနော် ဘုရားစင်လို့ ခေါ်တာထက် ဘုရားကျောင်းဆောင်လို့ ခေါ်တာက ပိုများသပ္ပါယ်မလားလို့ပါဆရာ။ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်အတွေးလေးကို ပြောပြတာပါ။
၃။ ဘုရားစင်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားကျောင်းဆောင်လို့ ခေါ်သင့်ပါတယ်ရှင့်။ ဖိနပ်စင် ပန်းကန်စင် စာအုပ်စင်တို့လို အရာဝတ္ထုတွေတင်တဲ့ စင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ မြတ်စွာဘုရား ကိန်းစံဝတ်စံမြန်းရာ ဘုရားကျောင်းဆောင်ပါရှင့်။
မြတ်စွာဘုရားဟာ ဗောဓိညောင်ပင်အောက်မှာ ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ မဟုတ်ပါ။ သတ္တဌာနမှာ ခုနစ်ရက်ခုနစ်လီ မဟာဗောဓိညောင်ပင်ကို စူးစိုက်ကြည့်တော်မူခဲ့တယ်။ (၄၉) ရက်တိတိ ဘယ်ကျောင်းမှ မရှိသေးပါ။ အဲဒီနောက်မှာ မိဂဒါဝုန်ကို ခြေလျင်ခရီးကြွတယ်။ လမ်းမှာ ကျောင်းတော်၊ ဇရပ်ရှိတယ်လို့ မဖတ်ဖူးပါ။
မြတ်စွာဘုရားဟာ သံဃာတော်တချို့ကိုအကြောင်းပြုပြီး၊ ပလလဲတောမှာ တပါးတည်း ဝါကပ်တော်မူပါတယ်။ မီးတင်းကုပ်မှာလည်း သီတင်းသုံးဖူးသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ကုသိနာရုံ အင်ကြင်းတောမှာ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်ပါတယ်။ ကျောင်းတော်ကြီးတွေမှာ မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့်သားသမီးတွေ အိမ်ခွဲတိုင်း၊ တပြည်တရွာကို ပြောင်းရွှေ့တိုင်းမှာ ရောက်တဲ့နေရာ ဘုရားစင်အရင်လုပ်လို့ သူတို့အမေက အမြဲမှာလေ့ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တသက်မှာ ရွှေရောင် ငွေရောင်တွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းဆောင် မရှိဖူးခဲ့ပါ။
မည်ကမတ္တဘုရားစင်တောင်မထားသူတွေက ဘုရားအဆုံးအမ ပိုတည်ကြသူတွေရှိနိုင်တယ်။
ပုလဲအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ဘုရားစင် ၃ဝ-၁၁-၂ဝ၁၄ နေ့ကပုံ။
FB Medicines သူများစီးပွါးရေးလည်း အားနာရတယ်
ဆရာ ဒီလိုသောက်ရင် တကယ်ပဲ အဆုတ် သန့်စေပါသလား ခဗျ fb ပေါ်ခဏ ခဏ တွေ့တွေ့နေလို့ပါ
အဲလိုဟာတွေအတွက် အချိန်ပုပ်မခံလိုပါ။ တမျိုးပြီးတမျိုး တခုပြီးတခု တယောက်ပြီးတယောက်က မေးကြတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ သူများစီးပွါးရေးလည်း အားနာရတယ်။ မနေ့ကပဲတင်ထားသေးတယ်။ ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတယောက် လက်ဖက်ရွက်ဆေးတမျိုးသောက်ရာကနေ အသဲပျက်စီးလို့ အစားထိုးရတယ်။
အဆုတ်သန့်ဆေး မရှိပါ။ သားအိမ်သန့်ဆေး မရှိပါ။ သွေးသန့်ဆေး မရှိပါ။ ဦးနှောက်ကောင်းဆေးမရှိပါ။ ၁၆ နှစ်သမီးလိုပြန်ဖြစ်တဲ့ဆေး မရှိပါ။
မေးခွန်းပါပုံတွေတင်ရင် ကျွန်တော့်မှာ သူများစီးပွါးရေး အားနာရတယ်။
Feedback ဖိဒ်ဘက် ဖေ့စ်ဘွတ်မဟုတ်
မြန်မာပြည်ကအလည်ပြန်လာသူ အိမ်ကိုလာလည်တယ်။ ကျွန်တော်က ပြည်ပနိုင်ငံရေးလုပ်နေစဉ် နှစ် ၂ဝ ကျော်အတွင်း ပြည်တွင်းကနေလာသူတိုင်းကို သွားတွေ့တယ်။ အိမ်ကို ထမင်းဖိတ်ကျွေးတယ်။ ဆွမ်းကပ်တယ်။ မြန်မာပြည်အကြောင်း မေးပါတယ်။
၁၉၆၁-၁၉၈၈ အတွင်းမှာ ၅ နှစ်စီမံကိန်းတွေ ၅ နှစ်တခါအောင်မြင်တယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ ၁၉၈၈-၂၀၁၅ အတွင်းမှာ လမ်း မိုင်ဘယ်လောက်၊ တံတားဘယ်နှစ်ခု၊ ကျောင်းဘယ်နှစ်ကျောင်း၊ ဆေးရုံဘယ်နှစ်ရုံဆိုတဲ့ တိုးလာတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေ နေ့တိုင်း သတင်းစာမှာပါတယ်။
ကနေ့လာသူက သူအရင် ၃ နှစ်ကတခေါက်ပြန်တာနဲ့ ကွာတာတွေတွေ့တယ်တဲ့။ ခက်ခက်ခဲခဲတွေရှိနေသေးတာမှန်ပေမဲ့ လူတွေက အသိတရား ပိုရှိလာကြတယ်လို့ ထင်ပါသတဲ့။
ကျွန်တော်က လူတွေကို ပိုသိချင်တာ။ အသိဉာဏ်ပညာနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား။
ခပ်တုံးတုံးတွေ နည်းစေချင်တာ။ အညာခံချင်သူတွေ နည်းစေချင်တာ။ ခြေနဲ့လက်သာသုံးသူတွေ နည်းပြီး၊ နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်သုံးတတ်သူတွေ များစေချင်တာ။
သီချင်းတပုဒ်တင်ထားတာ တွေ့တယ်။ ပါတ်ဝန်းကျင်လို့ရေးတာ မှားနေတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်လို့ ရေးသင့်တယ်။ တဖက်သတ်နဲ့ လူတဖက်သား ရေးတာတွေက မှန်တယ်။
ခုနစ်ရက်တပတ် (မြန်မာစာရေးထုံးကျမ်း၊ သီရိပျံချီ ဦးသာမြတ်)၊
ပဋိပါတ် (ဋ္ဋကို အတိုနဲ့ရေးတာဖြစ်၊ ကီးဘုတ်မှာရှာမရ)၊
တော်သလင်း ဆီးနှင်းတပြိုက် မိုးတလိုက်
မောင်ထွန်းသူဘာသာပြန်စာအုပ်အဖုံးမှာ နှင်းကြွင်းတစ်ပြိုက် နွေတစ်ရှိုက်လို့ဖတ်ရတော့ အတော်ကို ထောင့်နေ ထစ်နေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ စာတတ်ကတည်းကဖတ်လာ ရွတ်ဆိုလာတာက ဆီးနှင်းတပြိုက် မိုးတလိုက်လို့ တန်ဆောင်မုန်းလကို ဖွဲ့ဆိုပါတယ်။
တန်ဆောင်မုန်း၊ သောင်ကတုံးချောင်ခွာ၊ မအိပ်ရာ။
ဥတု ရာသီတွေ မှန်ပါစေ။ သဒ္ဒါ သတ်ပုံတွေ မှန်ပါစေ။
သူ့ဘုရားစင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပါဦးတဲ့။ ပန်းတွေနဲ့ အသီးတွေ ဝေနေတယ်။
ဝေတယ်ဆိုတာ လိုချင်သူတွေကို ပေးတာမှာလည်းသုံးတယ်။ ယူလိုသူတွေကို ညီတူမျှတူဝေလိုက်ပါတယ်။ ရကြပါစေသတည်း။
အနည်းဆုံးတော့ ပသာဒ။ ယူတတ်သူတွေက ဒိထက်မက။
ခွေးကလေး ပါပီ ကြောင်ကလေး ပူစီ
တူတော်မောင်တယောက်က ခွေးကလေးနဲ့ကစားနေတဲ့ပုံတွေ့လို့။ ပြီကိုပီလိုရေးတဲ့မေးခွန်း တနေ့မှာ ၄၅-၁၀ ယောက် လာတယ်။ မင့်ပုံကိုယူသုံးလိုက်ရင် ပီလို့ရေးသူ အယောက် ၂၀ ဖြစ်မှာစိုးလို့။
၁။ ကျတော့်ကလေးက ၉လ ရှိပါပီ ဝမ်းသွားတာ ၅ရက်ရှိပါပီ အန်လည်း အန်ပါတယ် အန်တာတော့ ပြောက်ပါပီ ပီးတော့ ကလေးက နို့လည်း သိပ်မသောက်ဘူး ပိန်လာပီး ကလေးတွက် ဝမ်းသွားနေချိန်မှာ အားဆေး တခုခုတိုက်ချင်ရင် ဘာဆေးတိုက်ရမလဲဆရာ ကလေးက နို့သောက်တာလည်း အရမ်းနည်းသွားတယ် ပိန်လည်းပိန်နေပါပီ
၂။ Share ပါပီ ဆရာ
၃။ ဟုတ် ကျေးဇူးပါ ဆရာ ဖတ်ပီးပါပီ
ပီလာ = ဧကန်မုချ၊ အမှန်
ပြီးခိုင် = ပြည့်စုံသည်
ခွေးကလေးပါပီသီချင်းကို ပီပီသသသီဆိုလို့ ပြီးပါပြီ။
မနေ့က တခုလပ်။ ကနေ့ မုဆိုးမ။ နိုင်ငံရေး မဟုတ်ပါ။
သူအရင်လား၊ ကိုယ်အရင်လားဆိုတာ စဉ်းစားမိကြတယ်။
သူရဲကောင်းတယောက်ရဲ့ မုဆိုးမဖြစ်ရတာဟာ သူရဲဘောကြောင်သူရဲ့ မိန်းမဖြစ်ရတာထက် သာလွန် ကောင်းမွန်တယ်တဲ့ ဒေါ်လိုရီ အီဗာရုရီကပြောတာ။ ကျမဟာ ပျော်စရာကောင်းပြီး ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတခုထူထောင်ဘို့ကြိုးစားနေမိတာ မှားတာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမရဲ့ နှလုံးသားက သေဆုံးသွားတဲ့ယောက်ျားရဲ့ရင်ထဲမှာ မြုပ်ထားပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားတဲ့ ခရစ်စတိန် ဟုပ် မက်ဇိုလာကရေးတာ။
ကျွန်တော်တို့လည်း သူအရင်လား၊ ကိုယ်အရင်လားဆိုတာ စဉ်းစားမိကြ၊ စကားစပ်မိကြတာ သုံးလေးနှစ်လောက် ရှိပြီ။ ကျွန်တော်ဇနီးက သူအရင်သာဖြစ်ချင်တယ်လို့ ပြောဘူးတာကို ထည့်ရေးရမလား၊ မရေးပဲ ထားရမလားနဲ့ အခုသာ ရေးပါတယ်။
ဒီစာရေးတာ လေးနှစ်တိတိ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဂုံနီအိတ်စွပ် သုံးချောင်းထောက် လျှောက်နေကြဆဲ။
My Parents အမေအဖေ့ ဓါတ်ပုံ
ကျွန်တော့်အမေက မင်းတိုင်ပင်တိုက်နယ်သူကြီးသမီး။ သူပုန်တွေနဲ့ အမျိုးတော်တဲ့ အဖေနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး၊ သားသမီးတွေ တယောက်ပြီး တယောက် ထွန်းပေါက်တယ်။ ကျွန်တော်မိဘတွေဟာ အသက်ရလေလေ စီးပွါးရေး ကြပ်တည်းလေလေ။ သူတို့က သားသမီးတွေကို ပညာအမွေပေးနိုင်ဘို့ထက် ဘာတခုမှမတွက်ခဲ့ကြပါ။ ကျွန်တော် ဆရာဝန်ဖြစ်လာဘို့ရာ ညီတွေ နှမတွေက အနစ်နာခံပေးကြရတယ်။
မိဘတွေ အိုကံမကောင်းကြတာမှာ သားနှစ်ယောက်က နိုင်ငံရေးထဲဝင်ပါခဲ့လို့။ အမေဆုံးပြီး နှစ်ပါတ်ကြာမှသာ ညီက မုံရွာထောင်ကလွတ်တယ်။ ကျွန်တော်က တိုင်းပြည်ထဲမှာမရှိပါ။ သူရေးတဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်စိုင် မကုန်နိုင်ဘူး (သို့) အမေ့ မုသားစကားရှစ်ခွန်း တင်ထားတာကို ဖတ်ရတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အမေဆုံးတဲ့သတင်းရော ညီထောင်က ထွက်တဲ့သတင်းပါ လေးလကြာမှသာ သိခွင့်ရခဲ့တယ်။
ဆရာဝန်ဖြစ်အောင်သင်ပေးထားတဲ့သူ့သားဟာ အမေခြေကျိုးတာကို ကုသပေးခွင့် မရလိုက်ပါ။ သူငယ်ချင်းက ကြည့်ပေးတယ်။ သူလည်း ဆုံးသွားပြီ။
အဖေဆုံးတဲ့ရက်ကိုတော့ နေ့ချင်းဆိုသလို သိခွင့်ရတယ်။ သူတို့ကျန်းမာရေးနဲ့ အသုဘအတွက် ဝါယမစိုက်ကြတဲ့ သွေးသားဆွေမျိုးတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေမျိုးတွေကို ကျေးဇူးတင်ဆဲ။ အဲဒီဆွေမျိုးတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
အမေနဲ့ အဖေ့ဓါတ်ပုံတွေကို ၅-၁၂-၂ဝ၁၄ ကနေ့မနက်မှာ ရပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကထွက်ရပြီးနောက် (၂၄) နှစ် ကြာမှသာ ရတာ။ အဖေဆုံးမခဲ့တာတွေ အခုထိကြားနေဆဲ။ အမေချက်ကျွေးခဲ့တာတွေ အခုထိ အရသာရှိဆဲ။
ကျွန်တော်တို့မိဘတွေ နောက်ဘဝတွေမှာ မင်းဆိုးဒဏ်သင့်သူတွေနဲ့ ကင်းပါစေ။ မြန်မာပြည်သူတွေ မင်းဆိုးဘေးက ဝေးပါစေ။ သီတင်းကျွတ်မှာ မိဘကျေးဇူးဆပ်နိုင်သူတွေ များပြားပါစေ။
ဆရာ့ကို ကြည့်ရတာ မြန်မာစာအဖွဲ့က မြန်မာစာပညာရှင်ကြီးတွေ ပြုစုတဲ့ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း၊ မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်၊ အင်္ဂလိပ် မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာစာ မြန်မာစကား စာအုပ်တွေကို တလေးတစားနဲ့ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကိုးကား ရေးသားသုံးစွဲနေသူတွေနဲ့ ဘာသတ်ပုံကျမ်းမှ မကြည့်၊ ဘာအဘိဓာန်မှလည်း မကိုးကားဘဲ ခေါင်းထဲ ပေါ်သလို စည်းမရှိကမ်းမရှိ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ရေးသားသုံးစွဲနေကြသူတွေကို တအုပ်စုတည်းလို့ သတ်မှတ်ပြီး ရောထွေးယှက်တင် ဖြစ်နေပုံပါပဲ။ ဝါးလုံးကို ဟိုဒင်းသုတ်ပြီး လျှောက်ပတ်ရမ်းနေသလို ဖြစ်နေပါတယ်ဆရာ။
မြန်မာစာ ယဉ်ကျေးမှု သုတစာတွေ ပုဒ်ရေ တထောင်လောက်ရှိပြီ။ အရေအတွက် ဘယ်လောက်ကိုဖတ်မိပြီး ဆွဲထာတဲ့ ကောက်ချက်လဲ စဉ်းစားနေပါတယ်။
ကွန်မင့်ကို ထပ်ဖတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က မေးခွန်းတွေနဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာရေးတာတချို့ကိုဖတ်ပါတယ်။ တနေ့မှာ စာရေးသူ အယောက် ၅ဝ ကျော်တယ်။ စာအုပ်ကြော်ငြာတွေလည်း ဖတ်တယ်။ သီချင်း၊ တရား၊ ဆုတောင်းစာတွေလည်းဖတ်တယ်။ ဆုရတယ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တွေလည်း သိပါတယ်။ ဘာကျန်သေးလဲ စဉ်းစားရပြန်တယ်။
မြန်မာစာပညာရှင်ကြီးတွေဆိုတာ ခုခေတ်ပေါ်သူတွေကိုသာ ခေါ်တယ်လို့ ကျွန်တော်က မထင်။ ကျွန်တော်က လက်ရှိ မြန်မာစာအဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ထဲက တချို့သတ်ပုံတွေကို သဘောမတူကြောင်းရေးပါတယ်။ မနေ့ကပဲ မြန်မာစာအဖွဲ့က တဦးက ဘီဘီစီကိုပြောတဲ့ ပဲ နဲ့ ဘဲအယူအဆက ကျွန်တော်ရေးတာနဲ့ အတူတူပဲ။ စာအုပ်ထဲမှာက မှားနေတာ။
စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံကျမ်း၊ မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာ အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်၊ အင်္ဂလိပ် မြန်မာအဘိဓာန်၊ မြန်မာစာ မြန်မာစကား စာအုပ်တွေထဲက မှားနေ လွဲနေတာတွေကို အဓိကပြောချင်တာ။
အကုသိုလ်ဆိုတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းသားကလုပ်လုပ် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကလုပ်လုပ် အတူတူပဲ။ အမှားဆိုတာ စာမဖတ်သူကရေးရေး ဘုရင်ကရေးရေး အတူတူပဲ။ ရောချလို့ရတဲ့သဘော။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ နေတယ်ဆိုတဲ့ present continuous tense ကို အငြင်းပုံစံရေးရင် အမှန်ကဘာလဲ သေချာမသိလို့ပါဆရာ။ မြန်မာစာသင်နေလား။ ဟင့်အင်း မသင်နေဘူး/ သင်မနေဘူး။ မကို ဘယ်နေရာမှာထားတာက သဒ္ဒါအမှန်လဲဆရာ။
မြန်မာစာကိုမေးတာလား အင်္ဂလိပ်စာလားတော့ မရှင်းပါ။ အင်္ဂလိပ်စာမှာ present continuous tense ကို မေးခွန်းလုပ်ရင် Be verb ကို ရှေ့ထုတ်လိုက်တာနဲ့ရတယ်။ အငြင်းဝါကျဆိုရင် Be verb နဲ့ -ing verb ကြားမှာ not ထည့်တာနဲ့ရတယ်။ သဒ္ဒါအမှန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။
ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်စာ Present continuous tense ကို အမေရိကန်အင်္ဂလိပ်စာမှာ Present progressive tense လို့ ခေါ်တယ်။ အခေါ်မတူပေမယ့် သဒ္ဒါတူပါတယ်။ မြန်မာစာမှာသာ သဒ္ဒါလွဲနေတယ်။
မြန်မာလို သင်မနေဘူးကသာ မှန်တယ်။ စစ်စစ်ပေါက်ပေါက် ကပ်ပြောရင်တော့ ရတယ်။ စာသင်ခြင်းအမှုကို လုပ်မနေ။ စာမသင်ခြင်းအမှုကို လုပ်နေလို့ ဆိုလိုတယ်။ မြန်မာစာမှာရော အင်္ဂလိပ်စာမှာပါ စာမသင်ခြင်းဆိုတာ မရှိပါ။
မြန်မာစာမှာ ခြင်း ထည့်ရင် နာမ်ဖြစ်တယ်။ မ ထည့်လို့ နာမ်မဖြစ်ပါ။ ကြိယာကိုသာ မ ထည့်ရပါတယ်။
အလားတူ သဒ္ဒါမမှန်တဲ့ စကားပြောတွေရှိတယ်။ မအိပ်နေဘူး။ မစားနေဘူး။ ပေးဖတ်တယ်။ ပေးစားတယ်။ သဒ္ဒါမှားပြီး အဓိပ္ပါယ်လွဲနိုင်တယ်။ နားထောင်တဲ့သူတွေကို နားကလောစေတယ်။
ပုံကစာကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ အဖိုး ထမင်းစားမယ်လို့ပြောချင်တာ အဖိုးကိုစားမယ် ဖြစ်နေတယ်။
ပို့စ်တခု တွေ့တယ်။ မန္တလေးမြို့တွင် စတု့က္ထအကြိမ်မြောက် အေရာဝတီစာပေပွဲတော်ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပါမည်တဲ့။
စာပေပွဲသတင်းမှာ သတ်ပုံကို အဲလိုရေးထားလို့ မျက်လုံးပြူးမိတယ်။ အလွယ်ရေးမိတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ မန္တလေးကိုတော့ ကြိုးစားရေးထားတယ်။ ကောင်းတယ်။ ချင်းတွင်းကိုပါ ခြင်းဒွင်းလုပ်မလာကြကောင်းပါရဲ့လို့ စိုးရိမ်စိတ်ပါဖြစ်လာတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကြောင့် စာပျက်ရတယ်။
အဲလိုပဲ စာသမားဆိုသူတွေက စာအုပ်တွေ တင်ပေးကြတယ်။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်တာတွေ တင်ပေးကြတယ်။ စာအုပ်က သတ်ပုံမှန်ကို တင်ပေးသူတွေက အမှားတွေနဲ့ စာရိုက်ထားကြတယ်။ ကောင်းပေမဲ့ မကောင်းပါ။
မြန်မာစာ ဧရာဝတီမြစ်ရေနဲ့အတူသာ ရှင်သန် မှန်မှန် စီးဆင်းပါစေသတည်း။
တစ်ကယ်လှတယ်လို့ ရေးနေကြသူများသို့ -
သံစဉ်စာသား - အဉ္ဇလီမောင်မောင် (မဇ္ဈိမလှိုင်း)
တေးစု - ၈၈၂ အင်းလျား (၁၉၈၄)
တေးသွားချို သီကာကျူးတဲ့ ကျေးငှက်ကို လှမ်းလို့ကြည့်ကာ ပန်းလေးက ပြောလိုက်တယ် လောကရဲ့ အလှအပဟာ တို့ပွင့်မှ ပြည့်စုံတာတဲ့ ပန်းချစ်သူပျားကပြုံးတယ် တောက်ပတဲ့အဆင်းလည်းရှိမယ် လိုက်ဖက်မယ့် မွှေးရနံ့နဲ့ဆို ဝတ်မှုန်ရယ် နင်နဲ့ နှိုင်းရင် ရှုံးကြမှာပဲ ရင်ထဲရှိ ရှိသမျှ ပြောပြရရင် တကယ်လှတယ် မြင်သူတကာငေး ငေးလောက်အောင် လှရက်လို့ ချူလိုသူတွေ လက်ထဲမှာ အလှမပျက်အောင် ဆုတောင်းတယ် ပန်းလေးရယ် သင်းပျံ့ကာအမြဲမွှေးစေချင်တယ်
မိုးကောင်းကင် ကြည်ပြာအောက်မှာ ကောင်းခြင်းတွေ ပေါင်းစုစည်းကာ သူ့ထက်ပိုကဲ လှသူ ရှိတော့ဖြင့် ရှိလိမ့်မယ် အေးမြတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်ရယ် တောင်းဆုတွေ ပြည့်ဝခဲ့သူ နူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားနဲ့အတူ စွဲမက်ဖွယ် စကားနဲ့ဆင့်ကာ တုယှဉ်ပြိုင် လာလို့နှိုင်းရင် ရှုံးကြမှာပဲ ရင်ထဲရှိရှိသမျှ ပြောပြရရင် တကယ်လှတယ် မြင်သူတကာငေး ငေးလောက်အောင် လှရက်လို့ ချူလိုသူတွေ လက်ထဲမှာ အလှမပျက်အောင် ဆုတောင်းတယ် မိန်းကလေးရယ် ပန်းလေးလိုလှတဲ့ချစ်သူရယ်
မှတ်ချက် - ရင်ထဲရှိ ရှိသမျှ ပြောပြရရင် တစ်ကယ်လှတယ် မဟုတ်ပါ။ မြန်မာစာ အလှမပျက် သင်းပျံ့ကာ အမြဲမွှေးစေချင်တယ်။
High School Drop Out အတန်းပညာ ပမာမထား အောင်မြင်ကြသ...
Strawberry Plant စထော်ဘယ်ရီပင်အောက်မှာ
ပျက် နှင့် ပြက်
Duck Chasing Little Girl မ ပါတိုင်း ဘဲ သုံးလို့ မမ...
Hepatitis Tests ဘီပိုးနဲ့ စီပိုး ဘယ်တော့စစ်မလဲ
မ ပါတိုင်း ဘဲ သုံးလို့ မမှန်နိုင်
An Old Tree တချိန်က သစ်ပင်ကြီး
Painful ejaculation သုက်ထွက်ချိန်နာခြင်း
မိန်းကလေး အမျိုးသမီး ယောက်ျားလေး အမျိုးသား
Omeprazole ဆေး သတိပေးချက်
Donate Life အသက်ကို လှူဒါန်းခြင်း
Red and Green Buds အင်ဒိုနီးရှားပန်း
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့ည
Daylight Saving Time နေ့အလင်းရောင်ချွေတာရေး နာရြီေ...
Cancer of the uterus သားအိမ်ကင်ဆာ
In-house Plants အိမ်ထဲက ပန်းခြံ
Every Ready လက်နှိပ်မီး
By Order of the King အမိန့်နဲ့ပြောင်းခိုင်းတာ စာမဟုတ်
I’m Sorry အလွန်တိုးတက်
မီးကို စာဖွဲ့ချင်သလို ဖြစ်လာတယ်
Fall Colors အရောင်တွေ ပြောင်းလာပြီ
ဂဏန်းဆိုရင် တစ်လို့ပြောတာက မှန်မယ်
Elephant Festival ဆင်ပွဲတော်
Blame Vs Praise နိန္ဒာ ပသံသာ
The Burden of Words ဝေါဟာရဒဏ်